Mormon Nwoma no
Nnianim ne Adansedie
Mormon Nwoma No Nhwɛsoɔ Kwankyerɛ
Ɛmu Nsɛm no Hyehyɛeɛ Pono
Nwoma Mua (PDF)
Aseɛ atwerɛ a ɛdadie
Emu nsɛm a Ɛka ho
deɛ ɛdi hɔ
Mormon Nwoma no din kratafa
Ɛno nti wɔde Nifae nkurɔfoɔ ho twerɛtohɔsɛm, ɛne Lamanfoɔ nso deɛ abɔ mu atwitwa no ntiatia atwerɛ—Wɔtwerɛɛe de kɔmaa Lamanfoɔ a wɔyɛ Israel fiefoɔ nkaeɛ ɛne Yudafoɔ ne Amanamanmufoɔ nso—Wɔnam mmaransɛm ne nkɔmhyɛ honhom ne yikyerɛ kwan so na wɔtwerɛɛe—ɔtwerɛe na ɔsii ano de sieɛ maa Awurade ama wɔansɛe no—Ama ɔnam Onyankopɔn akyɛdeɛ ne tumi so ayi apue na wɔakyerɛ aseɛ—Moronae de ne nsa sii ano na ɔde siee maa Awurade, ama wɔnam Amanamanmufoɔ so ayi apue wɔ ne mmerɛ mu—Wɔnam Onyankopɔn akyɛdeɛ so bakyerɛ aseɛ.
Mormon Nwoma no yɛ twerɛsɛm kronkron te sɛ Twerɛ Kronkron nso. Ɛyɛ twerɛtohɔsɛm a ɛfa kwan a Onyankopɔn si ne tetefoɔ a na wɔte Amɛrika Nsaasepɔn no tenaaɛ, ɛne asɛmpa a ɛtehɔ daa no mahyɛ no ma wɔ mu.
Mormon Nwoma no Ɛho Nkyerɛkyerɛ Mu Tiawa Bi
Mormon Nwoma no yɛ twerɛtohɔsɛm kronkron bi a ɛfa nnipa ahodoɔ a na wɔte tete Amɛrika hɔ na wakrukyire agu sika mprɛte ahodoɔ so. Waka mprɛte ahodoɔ nan ho nsɛm wɔ nwoma no ara mu:
1 Nifae 1
Nifae hyɛ aseɛ ka ne nkurɔfoɔ ho nsɛm—Lihae hunu egya fadum wɔ anisoadehunu mu na ɔkenkan firi nkɔmhyɛ nwoma mu—Ɔyi Onyankopɔn ayɛ, ɔka Mesaia no mmaeɛ no ho asɛm, na ɔhyɛ nkɔm fa Yerusalem sɛee ho—Yudafoɔ no taataa no. Bɛyɛ mfinhyia 600 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 2
Lihae faa n’abusuafoɔ ne wɔn kɔɔ ɛserɛ no a ɛda ɛpo kɔkɔɔ no nkyɛn no so—Wɔgya wɔn agyapadeɛ wɔ hɔ—Lihae bɔ afɔreɛ ma Awurade na ɔkyerɛkyerɛ ne mmammarima no sɛ wɔnni mmaransɛm no so—Laman ne Lemuɛl nwiinwii tia wɔn agya—Nifae yɛ setie na ɔbɔ mpaeɛ wɔ gyedie mu; Awurade kasa kyerɛ no, na ɔyii no sɛ ɔnni ne nuanom so. Bɛyɛ mfinhyia 600 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 3
Lihae mmammarima no san wɔn akyiri kɔ Yerusalem sɛ wɔrekɔfa yaawa prɛte no—Laban ampɛ sɛ ɔde prɛte no ma—Nifae tu ne nuanom fo na ɔhyɛ wɔn nkoran—Laban wia wɔn agyapadeɛ na ɔpɛ sɛ anka ɔkum wɔn—Laman ne Lemuel bobɔ Nifae ne Sam na ɔbɔfoɔ ka wɔn anim. Bɛyɛ mfinhyia 600–592 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 4
Nifae kum Laban sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no no, na ɔfaa kwan bi so maa ne nsa kaa yaawa mprɛte no—Soram pene so sɛ ɔbɛka Lihae abusuafoɔ no ho wɔ ɛserɛ no so. Bɛyɛ mfinhyia 600–592 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 5
Saraya kasa tia Lihae—Wɔn mmienu di ahurisie sɛ wɔn mmammarima no asan aba—Wɔbɔ afɔreɛ—Mose ne nkɔmhyɛfoɔ no ntwerɛ gu yaawa mprɛte no so—Mprɛte no kyerɛ sɛ, Lihae firi Yosef ase—Lihae hyɛ nkɔm fa n’asefoɔ ne sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wɔkora mprɛte no ho. Bɛyɛ mfinhyia 600–592 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 6
Nifae twerɛ nneɛma a ɛfa Nyankopɔn ho—Nifae botae ne sɛ ɔbɛtwetwe nnipa aba Abraham Nyankopɔn nkyɛn na wagye wɔn nkwa. Bɛyɛ mfinhyia 600–592 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 7
Lihae mmammarima no san kɔ Yerusalem na wɔto nsa ferɛ Ismael ɛne ne fiefoɔ ma wɔbɛka wɔn ho wɔ wɔn akwantuo no ho—Laman ne ebinom te atua—Nifae kasa kyerɛ ne nuanom sɛ wɔnya gyedie wɔ Awurade mu—Wɔde ntampehoma kyekyere no, na wɔfa adwene sɛ wɔbɛsɛe no—Gyedie tumi no yi no firi mu—Ne nuanom srɛ bɔnefakyɛ—Lihae ne ne nkurɔfoɔ bɔ afɔreɛ ne ɔhyeɛ afɔreɛ. Bɛyɛ mfinhyia 600–592 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 8
Lihae nya yikyerɛ a ɛfa nkwadua no ho—Ɔdi n’aba no bi na ɔhwehwɛ sɛ n’abusuafoɔ nso bɛyɛ saa ara—Ɔhu dadepoma, ɛkwan a ɛyɛ teatea na ɛyɛ hiahia, ne esum kabii a atwa nnipa ho ahyia—Saraya, Nifae ne Sam di aduaba no bi, mmom Laman ne Lemuel poe. Bɛyɛ mfinhyia 600–592 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 9
Nifae yɛ twerɛtohɔnsɛm ahodoɔ mmienu—Baako biara din de Nifae mprɛte—Wiase nneɛma ho abakɔsɛm na ɛwɔ mprɛte akɛseɛ no so; na nneɛma kronkron ho nsɛm nso wɔ nketewa no so. Bɛyɛ 600–592 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 10
Lihae hyɛ nkɔm sɛ Babilonfoɔ bɛfa Yudafoɔ nnɔmum—Ɔka Mesaia, Agyenkwa, Dimafoɔ no a ɔbɛfiri Yudafoɔ mu apue no ho asɛm. Lihae ka deɛ ɛsɛ sɛ ɔbɔ Onyankopɔn Adwammaa no asu no nso ho asɛm—Lihae ka Mesaia wuo ɛne ne wusɔreɛ ho asɛm—Ɔde Israelmma no toto ngodua ho—Nifae ka Nyankopɔn Ba no, Honhom Kronkron akyɛdeɛ, ne sɛdeɛ teneneeyɛ ho hia ho asɛm. Bɛyɛ mfinhyia 600–592 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 11
Nifae hunu Awurade Honhom na ɔnya nkwadua no anisoadehunu—Ɔhunu Onyankopɔn Ba no maame, na ɔsua Onyankopɔn a wapa ne ho afiri kɛse yɛ mu—Ɔhunu Onyankopɔn Adwammaa no asubɔ, ne Onyankopɔn adwuma, ɛne ne asɛnnuamubɔ—Ɔsan hunu Adwammaa no Asuafoɔ Dumienu no frɛ ne wɔn Nyamedwuma. Bɛyɛ mfinhyia 600–592 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 12
Nifae nya yikyerɛ wɔ bɔhyɛ asaase no ho; teneneeyɛ, amumuyɛ no ne emu nnipa ahweaseɛ; Onyankopɔn Adwammaa no mmaeɛ wɔ wɔn mu; ɛkwan a Akyidifoɔ Dumienu no ne Asuafoɔ Dumienu no bɛfa so abu Israel atɛn; ne wɔn a wɔtɔsini wɔ gyedie mu no nwuma ne efii tebea a wɔwɔ mu. Bɛyɛ mfinhyia 600–592 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 13
Nifae hunu wɔ anisoadehunu mu sɛ wɔate ɔbonsam asɔre wɔ Amanamanmufoɔ no mu, Amɛrika nhunuiɛ a ɛdi kan, ne ɛhyɛ a ɔbɛhyɛ amanfoforɔ ase, Twerɛ Kronkron no baabi a ɛyɛ pefee na ɛsombo bebree yera, Amanamanmufoɔ ɔwaeɛ no ho nsunsuansoɔ, Asɛmpa no mmaeɛ bio, ɛda a ɛdi akyire no mu twerɛsɛm no mmaeɛ ne Sion nkyekyerɛɛe. Bɛyɛ mfinhyia 600–592 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 14
Ɔbɔfoɔ bi ka nhyira ne nnomee a ɛrebɛba Amanamanmufoɔ so kyerɛ Nifae—Asɔre mmienu pɛ na ɛwɔ hɔ: Onyankopɔn Adwammaa no Asɔre ne ɔbonsam asɔre–Asɔre kɛseɛ a ɛyɛ akyiwadeɛ no taataa Onyankopɔn Ahoteɛfoɔ a wɔwɔ aman nyina ara mu—Osuafoɔ Yohane bɛtwerɛ nneɛma a ɛfa ewiase awieɛ ho. Bɛyɛ mfinhyia 600–592 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 15
Lihae asefoɔ nsa bɛka asɛmpa no firi Amanamanmufoɔ no hɔ wɔ nna a ɛdi akyire yi no mu—Wɔde Israel anoboaboa no toto ngodua no a wɔde ne mman no ankasa afra bɛsan abata ne ho bio—Nifae kyerɛ anisoadehunu a ɛfa nkwadua no ho ase, na ɔka Onyankopɔn atɛntenenee a ɛsɛ sɛ ɛte atirimuɔdenfoɔ firi ateneneefoɔ no ho asɛm. Bɛyɛ mfinhyia 600–592 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 16
Atirimuɔdenfoɔ no afa nokware sɛ ɛyɛ den—Lihae mmammarima wareware Ismael mmammaa—Leuhonu kyerɛkyerɛ wɔn kwan wɔ ɛserɛ no so—Nsɛm a ɛfiri Awurade hɔ no watwerɛ agu Leuhonu no so mmerɛ ano mmerɛ ano—Ismael wu; ɛnam amanehunu nti n’abusuafoɔ nwiinwii. Bɛyɛ mfinhyia 600–592 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 17
Awurade hyɛ Nifae sɛ ɔmpam ɛhyɛn—Ne nuanom tia no—Ɔka abakɔsɛm a ɛfa sɛdeɛ Onyankopɔn si ne Israel nante kyerɛ wɔn de tu wɔn fo—Onyankopɔn tumi hyɛ Nifae ma—Onyankopɔn hyɛ ne nuanom sɛ mma wɔmmfa wɔn nsa nka no, anyɛ saa a wɔbɛte agu sɛ ahaban wuɛ. Bɛyɛ mfinhyia 592–591 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 18
Wɔwie hyɛn no pam—Wɔka Yakob ne Yosef awoɔ ho nsɛm—Ɛdɔm no si mu sɛ wɔrekɔ bɔhyɛ asaase no so—Ismael mmammarima ne wɔn Yerenom ka ho ma wɔdi ahurisie na wɔte atua—Wɔkyekyere Nifae, na ahum kɛseɛ bi tu ma ɛbɔ hyɛn no san n’akyiri—Wɔsane Nifae ma ɔnya fawohodie, na ɛnam ne mpaebɔ so ma ahum no gyae tu—Nkurɔfoɔ no duru bɔhyɛ asaase no so. Bɛyɛ mfinhyia 591–589 ansaa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 19
Nifae de dadefuturo yɛ mprɛte na ɔtwerɛ ne nkurɔfoɔ ho abakɔsɛm wɔ so—Israel Nyankopɔn bɛba mfie ahansia akyire yi, fiti mmerɛ a Lihae firii Yerusalem no—Nifae ka n’amanehunu ɛne n’asɛnnua mu bɔ ho asɛm—Wɔbɛpo Yudafoɔ na wɔabɔ wɔn apete akɔduru nna a aka akyire yi no, saa mmerɛ no na wɔbɛsan aba Awurade nkyɛn. Bɛyɛ mfinhyia 588–570 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 20
Awurade da ne nsusuɛ adi kyerɛ Israel—Wapaw Israel afiri ahohiahia fononoo mu, na wɔbɛfiri Babilɔn—Fa toto Yesiah 48 ho. Bɛyɛ mfinhyia 588–570 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 21
Mesaia no bɛyɛ kanea ama Amanamanmufoɔ no, na ɔbɛma nnɛduafoɔ fawohodie—Wɔde tumi bɛka Israel aboa ano wɔ nna a edi akyire no mu—Ahemfo bɛyɛ wɔn agyanom a wɔgyegye mma—Fatoto Yesaia 49 ho. Bɛyɛ mfinhyia 588–570 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
1 Nifae 22
Awurade bɛbɔ Israel apete wɔ asaase nyina ara ani—Amanamanmufoɔ no de asɛmpa no bɛyɛn na wɔde atete Israel wɔ nna a edi akyire no mu—Wɔbɛboa Israel ano na wɔagye wɔn, na atirimuɔdenfoɔ bɛhye sɛ ɛsrɛdwaneɛ—Awurade bɛsɛe ɔbonsam aheman, na wɔbɛkyekyere ɔbonsam. Bɛyɛ mfinhyia 588–570 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 1
Lihae hyɛ fawohodie asaase ho nkɔm—Sɛ wɔpo Israel Kronkroni no a, Awurade bɛbɔ n’asefoɔ apete na wɔatwa wɔn atwene—Ɔkyerɛkyerɛ ne mmammarima no sɛ wɔnmfa tenenee akotaadeɛ no nhyɛ. Bɛyɛ mfinhyia 588–570 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 2
Dima firi Mesaia Kronkron no mu—Ɔkwan a nipa wɔ a ɔtumi de yɛ deɛ ɔpɛ a ɛho hia yie wɔ asetena ne mpontuo mu—Adam hwee ase maa nnipa asetena—Nnipa wɔ ho kwan sɛ ɔfa fawohodie ne nkwa a ɛnniawieɛ. Bɛyɛ mfinhyia 588–570 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 3
Yosef hunu Nifaefoɔ wɔ yikyerɛmu wɔ Misraim—Ɔhyɛɛ Yosef Smith a ɔyɛ nna a ɛdi akyire yi adehununi, Mose a na ɔbɛgye Israel; ɛne Mormon nwoma no ho nkɔm. Bɛyɛ mfinhyia 588–570 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 4
Lihae tu n’asefoɔ fo na ohyira wɔn—Owu na wɔsie no—Nifae hyɛ ne ho animuonyam wɔ Onyankopɔn papayɛ ho—Nifae de ne werɛ hyɛ Awurade mu afebɔɔ. Bɛyɛ mfinhyia 588–570 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 5
Nifaefoɔ te wɔn ho firi Lamanfoɔ ho, wɔdi Mose mmara so na wɔsi tɛmpol—Ɛnam Lamanfoɔ no akyinnyeɛ no nti wɔtwaa wɔn firi Awurade anim, ɔdomee wɔn; na wɔn bɛyɛ abaa wɔ Nifaefoɔ no so. Bɛyɛ mfinhyia 588–559 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 6
Yakob san ka Yudafoɔ ho abakɔsɛm: Wɔn nnɔmum mu kɔ wɔ Babilon ne wɔn mmaeɛ mu; Israel Kronkroni no som adwuma no, ɛne ne asenuamu bɔ; mmoa a ɔnya firii Amanamanmufoɔ hɔ; ne sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Yudafoɔ no bɛgye Mesaia no adi ama, nna a edi akyire no, wɔasi wɔn dada mu. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 7
Yesaia kasa sɛ Mesaia—Mesaia no bɛnya nwomanimfoɔ no tekyerɛma—Ɔbɛdane n’akyiri ama mmaahwefoɔ—N’anim renngu ase—Fatoto Yesaia 50 ho. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 8
Awurade bɛkyekyere Sion werɛ na waboa Israel ano wɔ nna a edi akyire no mu—Wɔn a wadi ama wɔn no de ahurusie bɛba Sion—Fatoto Yesaia 51 ɛne 52:1–2 ho. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 9
Wɔbɛboa Yudafoɔ ano wɔ wɔn nsaase a wɔde bɔɔ wɔn anohoba no nyina ara so—Mpata gye nnipa firi Ahweaseɛ mu—Awufoɔ nnipadua bɛfiri awumena mu apue, na wɔn honhom nso afiri asamando ne paradise—Wɔbɛbu wɔn atɛn—Mpata no gye nnipa firi owuo mu, asamando, ɔbonsam no, ne ateetee a ɛnni awieɛ mu—Wɔbɛgye ateneneefoɔ nkwa wɔ Onyankopɔn aheman mu—wɔahyehyɛ bɔne ho asotweɛ ato hɔ—Israel Kronkroni no ne ɛpono no wɛmfoɔ. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 10
Yudafoɔ no bɛbɔ wɔn Nyankopɔn asɛnnua mu—Wɔbɛbɔ wɔn apete akɔsi sɛ wɔbɛhyɛ aseɛ agye no adie—Amɛrika bɛyɛ fawohodie asaase, baabi a ɔhene biara renni so—Monsan mfa mo ho mmɔ Nyankopɔn na monya nkwagyeɛ mfiri n’adom mu. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 11
Yakob hunu ne Dimafoɔ—Mose mmara yɛ Kristo no nsɛnkyerɛnee na ɛkyerɛ sɛ ɔbɛba. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 12
Yesaia hunu tɛmpol no wɔ nna a ɛdi akyire no, Israel anoboaboa, ne mfie apem atɛmmuo ne asomdwoeɛ—Wɔbɛbrɛ wɔn a wɔyɛ ahomasoɔ ne atirimuɔdenfoɔ ase wɔ Awurade Mmaeɛ a ɛtɔ so Mmienu no mu—Fatoto Yesaia 2 ho. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 13
Wɔbɛtwe Yuda ne Yerusalem aso wɔ wɔn asoɔden ho—Awurade srɛ ma ne nkurɔfoɔ na ɔbu ne nkurɔfoɔ atɛn—Wɔadome Sion mmammaa na wɔateetee wɔn, ɛnam wɔn wiase ahopɛ nti—Fatoto Yesaia 3 ho. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 14
Wɔbɛdi ama Sion ne ne mmammaa na wɔate wɔn ho wɔ mfie apem no mu—Fatoto Yesaia 4 ho. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 15
Awurade bobeturo (Israel) bɛyɛ amanfo na wɔbɛbɔ ne nkurɔfoɔ ahwete—Nomee bɛba wɔn so wɔ wɔn gyedie asehweɛ ne wɔn apetebɔ mu—Awurade bɛma frankaa so na waka Israel aboa ano—Fatoto Yesaia 5 ho. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 16
Yesaia hunu Awurade—Wɔde Yesaia bɔne kyɛ no—Wɔfrɛ no sɛ ɔnhyɛ nkɔm—ɔhyɛ Kristo nkyerɛkyerɛ a Yudafoɔ no bɛpo no ho nkɔm—Nkaeɛ bi bɛsan aba—Fatoto Yesaia 6 ho. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 17
Efraim ne Siria tu Yuda so sa—Ɔbabunu bi na ɔbɛwo Kristo—Fatoto Yesaia 7 ho. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 18
Kristo bɛyɛ sɛ suntiboɔ ne suntiduatoɔ botan—Hwehwɛ Awurade, nnyɛ abayie a wɔyɛ dede—Dane kɔ mmara ne adansedie ho kɔpɛ akwankyerɛ—Fatoto Yesaia 8 ho. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 19
Yesaia ka Mesaia ho asɛm—Nkurɔfoɔ a wɔnante sum mu no bɛhunu hann kɛseɛ—Wɔawo ɛba ama yɛn—Wɔbɛfrɛ no Asomdwoeɛ Hene na ɔbɛdi hene wɔ Dawid ahennwa so—Fatoto Yesaia 9 ho. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa ana wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 20
Asiria sɛee no te sɛ atirimuɔdenfoɔ sɛee wɔ Awurade Mmaeɛ a ɛtɔ so Mmienu no mu—nnipa kakraabi na ɛbɛka wɔ Awurade mmaeɛ bio akyire yi no—Yakob nkaeɛfoɔ no bɛsan aba saa da no mu—Fatoto Yesaia 10 ho. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 21
Yisai dunsini (Kristo) bɛbu atɛn wɔ tenenee mu—Nyankopɔn ho nimdeɛ bɛkata asaase so wɔ mfie apem no mu—Awurade bɛma frankaa so na wɔaka Israel aboa ano—Fatoto Yesaia 11 ho. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 22
Nnipa nyina ara bɛyi Awurade ayɛ wɔ mfie apem no mu—Ɔbɛtena wɔn mu—Fatoto Yesaia 12 ho. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 23
Sɛdeɛ wɔbɛsi asɛe adeɛ wɔ Awurade Mmaeɛ a ɛtɔ so Mmienu no mu no te sɛ Babilon sɛeɛ—Ɛbɛyɛ abufuo ne awerɛtɔ da—Babilon (ewiase) bɛhwease afebɔɔ—Fatoto Yesaia 13 ho. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 24
Wɔbɛka Israel aboa ano na wɔanya mfie apem ahomegyeɛ—Wɔtoo Lusifa firii soro ɛnam atuateɛ nti—Israel bɛdi nkonim wɔ Babilon (wiase) so—Fatoto Yesaia 14 ho. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 25
Nifae di dɛ wɔ pefeeyɛ mu—Wɔbɛte Yesaia nkɔmhyɛ no ase wɔ nna a ɛdi akyire no mu–Yudafoɔ no bɛfiri Babilon asan aba, abɔ Mesaia asɛnnua mu, na wɔbɛbɔ wɔn apete na wɔatwe wɔn aso—Sɛ wɔgye Mesaia, no di a, wɔbɛsan agye wɔn—Ɔbɛdi kan aba mfinhyia ahansia akyiri Lihae firii Yerusalem—Nifaefoɔ no di Mose mmara so gye Kristo a ɔyɛ Israel Kronkroni no di. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 26
Kristo bɛsom Nifaefoɔ no—Nifae hunu ne nkurɔfoɔ sɛeɛ—Wɔbɛkasa afiri mfuturo mu—Amanamanmufoɔ no bɛsisi atorɔ nsɔre ne kokoa mu kuo—Awurade bera nnipa a wɔde asɔfotorɔsɛm no bɛyɛ sika pɛ ho. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 27
Esum ne gyedie ho asehweɛ bɛkata asaase so wɔ nna a ɛdi akyire no mu—Wɔbɛda Mormon Nwoma no adi—Nnipa mmiɛnsa bɛdi nwoma no ho adanseɛ—Nwomanimfoɔ no bɛka sɛ ɔrentumi nkenkan nwoma a wɔasɔ ano no—Awurade bɛyɛ adwuma ɛyɛ hu na ɛyɛ nnwanwa—Fatoto Yesaia 29 ho. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 28
Wɔbɛsisi atorɔ nsɔrensɔre bebree wɔ nna a ɛtwa toɔ no mu—Wɔbɛkyerɛ atorɔ nkyerɛkyerɛ, nkyerɛkyerɛ hunu, ne nkwasea nkyerɛkyerɛ—Ɛnam atorɔ akyerɛkyerɛfoɔ nti, gyedie ahweaseɛ bɛba—Ɔbonsam bɛwoso wɔ nnipa akoma mu—Ɔbɛkyerɛ atorɔ nkyerɛkyerɛ ahodoɔ nyina ara bi. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 29
Amanamanmufuo bebree bɛpo Mormon Nwoma no—Wɔn bɛka sɛ, Yɛnnhia Twerɛ Kronkron biara bio—Awurade kasa kyerɛ aman bebree—Ɔnam nwoma a ɔbɛtwerɛ no so bɛbu wiase atɛn. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 30
Wɔbɛkan Amanamanmufoɔ a wɔasakyera no aka apam nkurɔfoɔ no ho—Lamanfoɔ ne Yudafoɔ bebree bɛgye asɛm no adi na wɔabɛyɛ anikafoɔ—Wɔbɛsan agye Israel na wɔasɛe atirimuɔdenfoɔ. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 31
Nifae ka sɛdeɛ nti a Kristo nyaa asubɔ—Ɛwɔ sɛ nnipa di Kristo akyi, wɔn nsa ka asubɔ, wɔn nsa ka Honhom Kronkron no, na wɔsi apinee kɔsi awieɛ ama wɔagye wɔn nkwa—Nsakyeraɛ ne asubɔ ne ɛkwan a ɛyɛ ketewa na ɛyɛ hiahia no pono—Nkwa a ɛnniawieɛ wɔ hɔ ma wɔn a wɔdi mmaransɛm no so wɔ asubɔ akyiri. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Abɔfoɔ nam Honhom Kronkron tumi so kasa—Ɛwɔ sɛ nnipa bɔ mpaeɛ na ɔnam Honhom Kronkron no so nya nimdeɛ de ma wɔn ho. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
2 Nifae 33
Nifae nsɛm yɛ nokware—Ɛdi Kristo ho adanseɛ—Wɔn a wɔwɔ gyedie wɔ Kristo mu no, bɛnya gyedie wɔ Nifae nsɛm mu, ɛbɛgyina hɔ sɛ adanseɛ wɔ atɛmmuo adaka no anim. Bɛyɛ mfinhyia 559–545 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Yakob ne Yosef pɛɛ sɛ wɔbɛma nnipa anya gyedie wɔ Kristo mu na wɔadi ne mmaransɛm so—Nifae wu—Amumuyɛdeɛ sɔre wɔ Nifaefoɔ mu. Bɛyɛ mfinhyia 544–421 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Yakob pae mu kyerɛ ɔdɔ a ɛwɔ ahonyadeɛ ho, ahomasoɔ, ɛne abrabɔ bɔne—Nnipa bɛtumi ahwehwɛ ahonyadeɛ de aboa ne nuanom—Yakob kasa tia awaredodoɔ nhyehyɛeɛ a mmera tia—Awurade anigye mmaa a wɔdi wɔn ho ni. Bɛyɛ mfinhyia 544–421 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Wɔn a wɔn akoma mu teɛ no nya Onyankopɔn asɛm a ɛsɔ ani no—Lamanfoɔ yɛ ahoteɛfoɔ kyɛn Nifaefoɔ—Yakob bɔ adwaamanmmɔ, akɔnɔ bɔne ne bɔne biara ho kɔkɔ. Bɛyɛ mfinhyia 544–421 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Nkɔmhyɛfoɔ no nyina ara nam Kristo din mu na ɛsom Agya no—Abraham afɔreɛ a na ɔde Isak rebɔ no te sɛ Onyankopɔn ɛne ne Ba korɔ no—Ɛwɔ sɛ nnipa fa Mpata no so ne Onyankopɔn ka wɔn ho bɔ mu—Yudafoɔ bɛpo boɔ fapem no. Bɛyɛ mfinhyia 544–421 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Yakob de Senos nsɛm no toto ngodua a nipa adua ne kwaeɛ ngodua ho—Wɔtesɛ Israel ne Amanamanmufoɔ—Wɔaka Israel a wɔabɔ wɔn apete ɛne ka a wɔaka wɔn aboa ano ho asɛm dada—Wɔkasa fa Nifaefoɔ ne Lamanfoɔ ne Israel fiefoɔ nyina ara wɔ abɛbuo mu—Wɔde Amanamanmufoɔ bɛbata Israel ho—Akyire koraa no wɔbɛhye bobeturo no. Bɛyɛ mfinhyia 544–421 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Nna a edi akyire no Awurade bɛsan aboa Israel ano—Wɔde egya bɛhye wiase—Ɛwɔ sɛ nnipa di Kristo akyiri na wɔankɔ egya ne sɔfe tadeɛ no mu. Bɛyɛ mfinhyia 544–421 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Serem po Kristo, ɔne Yakob di asie, ɔhwehwɛ nsɛnkyerɛnee, na Onyankopɔn twa no—Nkɔmhyɛfoɔ no nyina ara aka Kristo ɛne ne mpata no ho asɛm—Nifaefoɔ nna nyina ara mu no wɔbɛyɛɛ akyinkyiniakyinkyinifoɔ, wɔwo wɔn wɔ awerɛhoɔ mu, na Lamanfoɔ tane wɔn. Bɛyɛ mfinhyia 544–421 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Enos bɔ mpaeɛ dendennden na ɔnya ne bɔne ho bɔnefakyɛ—Awurade nne ba n’adwene mu, ɔrehyɛ no bɔ sɛ Lamanfoɔ bɛnya nkwagyeɛ dabi—Nifaefoɔ pɛ sɛ wɔbɛsan atwe Lamanfoɔ no aba—Enos di ahurisie wɔ ne Dimafoɔ mu. Bɛyɛ mfinhyia 420 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Nifaefoɔ di Mose mmara so, wɔhwehwɛ Kristo mmaeɛ kwan, na wɔyɛ frɔmfrɔm wɔ asaase no so—Nkɔmhyɛfoɔ bebree bɔ mmɔden sɛ wɔde nnipa no bɛfa nokware kwan no mu. Bɛyɛ mfinhyia 399–361 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Omnae, Amaron, Kemis, Abinadɔm, ne Amalɛkae, wɔn mu biara kora twerɛtohɔsɛm no—Mosaya hunu Sarahɛmla nkurɔfoɔ no a wɔfiri Yerusalem baeɛ wɔ Sedekia mmerɛ so no—Wɔyɛ Mosaya ɔhene wɔ wɔn so—Mulɛk asefoɔ a wɔwɔ Sarahɛmla no kɔpuee Koriantuma a ɔyɛ Yarɛdfoɔ nnipa a, ɔtwa toɔ no so—Ɔhene Benyamin di Mosaya adeɛ—Ɛsɛ sɛ nnipa de wɔn akra bɔ afɔreɛ ma Kristo. Bɛyɛ mfinhyia 323–130 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Mormon twitwa Nifae mprɛte akɛseɛ no so ntiatia—Ɔde mprɛte nketewa no na ɛkaa mprɛte nkaeɛ no ho—Ɔhene Benyamin hwɛ ma asomdwoeɛ ba asaase no so. Bɛyɛ mfinhyia 385 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Ɔhene Benyamin kyerɛkyerɛ ne mmammarima wɔn agyanom kasa ne wɔn nkɔmhyɛ—Ɛnam wɔn twerɛtohɔsɛm mprɛte ahodoɔ no nti ama wɔatumi akora wɔn som ne wɔn anibue—Wɔpa Mosaya sɛ ɔhene na wɔde twerɛtohɔsɛm ne nneɛma bi nso maa ɔde sieeɛ. Bɛyɛ mfinhyia 130–124 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Ɔhene Benyamin kasa kyerɛ ne nkurɔfoɔ—Ɔka pɛpɛyɛ, nokwaredie ɛne ne honhom mu nsɛm wɔ n’ahennie mu—Ɔtu wɔn fo sɛ wɔnsom wɔn Soro Hene—Wɔn a wɔte Onyankopɔn so atua no bɛhunu amane tesɛ egya a ɛnnum da. Bɛyɛ mfinhyia 124 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Ɔhene Benyamin toa ne kasa so—Awurade Kokoroko no bɛsom wɔ nnipa mu wɔ nnɛteɛ ntomadan mu—Mogya bɛfiri ne honamdua no tokuro biara mu wɔ mmerɛ a ɔrepata ama wiase bɔne no—Ne din no nko ara mu na nkwagyeɛ nam so ba—Nnipa bɛtumi de nnipa a ɔwɔ honam mu ato hɔ, na wɔafa Kristo Mpata no so abɛyɛ Ahoteɛfoɔ—Atirimuɔdenfoɔ ateeteɛ bɛyɛ sɛ ogya tadeɛ ne sɔfe. Bɛyɛ mfinhyia 124 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Ɔhene Benyamin toa ne kasa so—Ɛnam Mpata no nti na nkwagyeɛ ba—Gye Awurade di na ɔnye wo nkwa—Nya gyedie na wanya bɔnefakyɛ—Momfa mo ahodeɛ no bi mma ahiafoɔ—Yɛ adeɛ nyina ara wɔ nyansa ne kwan pa so. Bɛyɛ mfinhyia 124 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Ahoteɛfoɔ no nam gyedie so bɛyɛ Kristo mmammarima ne mmammaa—Afei wɔde Kristo din na ɛfrɛ wɔn—Ɔhene Benyamin kasa kyerɛ wɔn sɛ wɔnyina pintinn na ɛmma wɔnhinhim wɔ nwumapa yɛ mu. Bɛyɛ mfinhyia 124 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Ɔhene Benyamin twerɛ nkurɔfoɔ no din na ɔpa asɔfoɔ sɛ wɔnkyerɛkyerɛ wɔn—Mosaya di adeɛ sɛ ɔhene a ɔtene. Bɛyɛ mfinhyia 124–121 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Amon kɔhunu Lihae-Nifae asaase no, baabi a Limhae yɛ ɔhene no—Limhae nkurɔfoɔ wɔ nkoasom mu wɔ Lamanfoɔ nsa mu—Limhae da wɔn abakɔsɛm adi—Nkɔmhyɛni bi (Abinadae) adi adanseɛ sɛ Kristo yɛ Onyankopɔn ne adeɛ nyina ara Agya—Wɔn a wɔdua adeɛ a ɛyɛ fii no, wɔtwa kyinhyia mframa, na wɔn a wɔde wɔn werɛ hyɛ Awurade mu no wɔbɛgye wɔn. Bɛyɛ mfinhyia 121 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Amon kyerɛkyerɛ Limhaefoɔ—Ɔsua nsɛm a ɛwɔ Yaredfoɔ mprɛte aduonunan no so—Adehunufoɔ na ɛtumi kyerɛ tete twerɛtohɔsɛm ase—Akyɛdeɛ biara nsombo nkyɛn anisoadehunu. Bɛyɛ mfinhyia 121 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Sɛnif di ɛdɔm bi a wɔfiri Sarahɛmla anim sɛ wɔrekɔgye Lihae-Nifae asaase no—Lamanfoɔ hene no ma wɔn kwan sɛ wɔmfa—Ɛko si Lamanfoɔ ne Sɛnif nkurɔfoɔ no ntam. Bɛyɛ mfinhyia 200–187 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Ɔhene Laman wu—Ne nkurɔfoɔ no yɛ kekakeka na wɔn firi ho yɛ hu na wɔgye amammerɛ a ɛnnyɛ nokware di—Sɛnif ɛne ne nkurɔfoɔ di wɔn so nkunim. Bɛyɛ mfinhyia 187–160 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Ɔhene Noa di hene wɔ atirimuɔden mu—Ɔne ne yerenom ne ne mpenafoɔ gye wɔn ani wɔ basabasa abrabɔ mu—Abinadae hyɛ nkɔm sɛ wɔbɛfa nkurɔfoɔ no akɔ nkoasom mu—Ɔhene Noa hwehwɛ sɛ ɔbɛkum no. Bɛyɛ mfinhyia 160–150 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Abinadae da afiase ɛnam nkɔmhyɛ a ɔhyɛɛ sɛ nkurɔfoɔ no bɛsɛe ne Ɔhene Noa wuo ho—Atorɔ asɔfoɔ no kasa firi twerɛsɛm no mu na wɔyɛ te sɛdeɛ wɔdi Mose mmara so no—Abinadae hyɛ aseɛ kyerɛkyerɛ wɔn Mmara Du no. Bɛyɛ mfinhyia 148 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Tumi a ɛfiri Onyankopɔn hɔ bɔɔ Abinadae ho ban—Ɔkyerɛkyerɛ Mmara Du no—Nnyɛ Mose mmara no nko ara mu na nkwagyeɛ firi ba—Onyankopɔn no ara de ne ho bɛyɛ mpata na wadi ama ne nkurɔfoɔ. Bɛyɛ mfinhyia 148 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Yesaia ka Mesaia ho asɛm—Wɔda n’animguaseɛ ne n’amanehunu adi—Ɔde ne kra bɔ afɔdeɛ ma bɔne na ɔyɛ ntamgyinafoɔ ma mmaratofoɔ—Fatoto Yesaia 53 ho. Bɛyɛ mfinhyia 148 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Sɛdeɛ Kristo yɛ Agya ne Ɔba no—Ɔbɛyɛ ntamgyinafoɔ na wasoa ne nkurɔfoɔ mmaratoɔ—Wɔn ne nkɔmhyɛfoɔ Kronkron no nyina ara yɛ n’asefoɔ—Ɔde owusɔreɛ ba—Nkwadaa nketewa wɔ nkwa a ɛnniawieɛ. Bɛyɛ mfinhyia 148 ansa wa wɔrebɛwo Kristo.
Onyankopɔn dima nnipa firi wɔn yera ne wɔn ahweaseɛ tebea mu—Wɔn a wɔwɔ honam mu no gyina wɔn anan mu te sɛdeɛ ɔgyeɛ nni hɔ mma wɔn—Kristo de owusɔreɛ ba de ma nkwa a ɛnni awieɛ anaa ɛfɔbuo a ɛnni awieɛ. Bɛyɛ mfinhyia 148 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Alma gyedi na ɔtwerɛ Abinadae nsɛm no—Abinadae wu wɔ egya mu—Ɔhyɛ nkɔm sɛ wɔn a wɔrekum no no bɛyare na wɔnam egya mu na wɔbɛwu. Bɛyɛ mfinhyia 148 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Alma ka nsɛm wɔ kokoa mu—Ɔkyerɛkyerɛ asubɔ apam mu na ɔbɔ asu wɔ nsuwa Mormon mu—Ɔkyekyere Kristo Asɔre na ɔhyɛ asɔfoɔ—Wɔkɔ wɔn ho mmoa na ɔkyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ no—Alma ne ne nkurɔfoɔ dwane firi ɔhene Noa hɔ kɔ ɛserɛ no so. Bɛyɛ mfinhyia 147–145 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Gideon hwehwɛ sɛ ɔkum Ɔhene Noa—Lamanfoɔ no tu asaase no so sa—Ɔhene Noa wu wɔ egya mu—Limhae ahennie no yɛɛ ɔhene a ɔtua toɔ ma ɔhene kɛseɛ. Bɛyɛ mfinhyia 145–121 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Noa asɔfoɔ no bi kyekyeree Lamanfoɔ mmammaa no bi dwane—Lamanfoɔ no tu Limhae ne ne nkurɔfoɔ so sa—Wɔpia Laman asraafoɔ no kɔ wɔn akyiri na wɔpata wɔn. Bɛyɛ mfinhyia 145–123 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Lamanfoɔ twitwaa Limhae nkurɔfoɔ no na wɔdi wɔn so nkonim—Limhae nkurɔfoɔ hyia Amon na ɔsakyera wɔn—Wɔka Yared mprɛte aduonu nan no ho asɛm kyerɛ Amon. Bɛyɛ mfinhyia 122–121 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Nkurɔfoɔ no yɛɛ nhyehyɛeɛ a wɔbɛtumi afa so adwane afiri Lamanfoɔ nkoasom no mu—Wɔmaa Lamanfoɔ no boro nsa—Nkurɔfoɔ no dwane, wɔsan kɔ Sarahɛmla, na wɔbɛsom Ɔhene Mosaya. Bɛyɛ mfinhyia 121–120 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Alma ampɛ sɛ ɔbɛdi hene—Ɔdii ɔsɔfo panin—Awurade tea ne nkurɔfoɔ, na Lamanfoɔ no di Helam asaase no so nkonim—Amulɔn deɛ ɔyɛ ɔhene Noa asɔfoɔ atirimuɔden no akandifoɔ no, bu ɔman no wɔ Lamanfoɔ hene no ase. Bɛyɛ mfinhyia 145–121 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Amulɔn taataa Alma ne ne nkurɔfoɔ—Sɛ wɔbɔ mpaeɛ a wɔbɛkum wɔn—Awurade yɛ ma wɔn nnesoa yɛ sɛdeɛ ɛmu yɛ hare—Ɔyi wɔn firi nkoasom mu, na wɔsan kɔ Sarahɛmla. Bɛyɛ mfinhyia 145–120 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Mulɛk asefoɔ a wɔwɔ Sarahɛmla bɛyɛ Nifaefoɔ—Wɔte Alma nkurɔfoɔ ne Sɛnif nkurɔfoɔ ho asɛm—Alma bɔ Limhae ne ne nkurɔfoɔ nyina ara asu—Mosaya ma Alma kwan ma ɔte Onyankopɔn asɔre. Bɛyɛ mfinhyia 120 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Annyeanniefoɔ de asɔre mma bebree kɔ bɔne mu—Wɔde nkwa a ɛnniawieɛ bɔ Alma anohoba—Wɔn a wɔsakyeraae na wɔbɔ wɔn asu nya bɔnefakyɛ—Asɔre mma adebɔneyɛfoɔ a wɔsakyeraae na wɔka wɔn bɔne kyerɛ Alma ne Awurade bɛnya bɔnefakyɛ, anyɛ saa a wɔrenkan wɔn mfra asɔre mma ho. Bɛyɛ mfinhyia 120–100 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Mosaya bra ataataa yɛ na ɔhyɛ sɛ obiara nhunu sɛ ɔne ne nua yɛ pɛ—Alma ketewa ne Mosaya mmammarima nan no hwehwɛ sɛ wɔbɛsɛe Asɔre no—Ɔbɔfoɔ pue hɔ na ɔhyɛ sɛ wɔn nnyae ɔkwan bɔne a wɔnam so no—Alma tɔre mmum—Ɛwɔ sɛ wɔwo adasamma nyina ara foforɔ ma wɔnya nkwagyeɛ—Alma ne Mosaya mmammarima no bɔ asɛmpa ho dawuro. Bɛyɛ mfinhyia 100–92 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Mosaya mmammarima no kɔka nsɛmpa no kyerɛ Lamanfoɔ no—Mosaya nam adehununi aboɔ mmienu no so kyerɛ Yaredfoɔ mprɛte no ase. Bɛyɛ mfinhyia 92 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Mosaya de to dwa sɛ wɔmpa atɛmmuafoɔ nhyɛ ahemfo anan mu—Ahemfo a wɔn ntene de wɔn nkurɔfoɔ kɔ bɔne mu—Alma kumaa no na nkurɔfoɔ no de wɔn nne yii no sɛ ɔnyɛ ɔtɛmmuafoɔ panin—Ɔsan nso yɛ ɔsɔfo panin a ɔhwɛ asɔre no so—Alma Panin no ne Mosaya wu. Bɛyɛ mfinhyia 92–91 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Nehɔ kyerɛkyerɛ atorɔ nkyerɛkyerɛ, ɔte asɔre, ɔhyɛ asɔfotorɔsɛm ase, na ɔkum Gideon—Wɔkum Nehɔ wɔ n’awudie ho—Asɔfotorɔsɛm nkyerɛkyerɛ ne ntaataa asetrɛ wɔ nkurɔfoɔ no mu—Asɔfoɔ no ara hwɛ wɔn ho, nkurɔfoɔ no hwɛ ahiafoɔ, na asɔre no yɛ frɔmfrɔm. Bɛyɛ mfinhyia 91–88 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Amlisae pɛ sɛ ɔbɛdi hene na ne nkurɔfoɔ no de nne korɔ ampene so—N’akyidifoɔ si no ɔhene—Amlisaefoɔ tu Nifaefoɔ so sa na wɔdii nkoguo—Lamanfoɔ ne Amlisaefoɔ ka wɔn asraafoɔ bɔ mu na wɔdii nkoguo—Alma kum Amlisae. Bɛyɛ mfinhyia 87 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Amlisaefoɔ no hyɛɛ wɔn ho nso sɛdeɛ nkɔmhyɛsɛm no teɛ—Wadome Lamanfoɔ no ɛnam wɔn atuateɛ nti—Nnipa ara na ɛde nomee ba wɔn so—Nifaefoɔ no di Lamanfoɔ asraafoɔ foforɔ so nkunim. Bɛyɛ mfinhyia 87–86 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Alma bɔ nnipa mpempem a wɔasakyera asu—Amumuyɛ ba asɔre no mu, na asɔre no mpontuo brɛ ase—Wɔyi Nifaeha ma ɔbɛyɛ ɔtɛmmuafoɔ panin—Alma, sɛ ɔsɔfo panin, ɔtu ne ho si hɔ ma Ɔsom no. Bɛyɛ mfinhyia 86–83 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Ansa na nnipa bɛnya nkwagyeɛ no, ɛwɔ sɛ wɔsakyera na wɔdi mmaransɛm no so, na wɔwo wɔn foforɔ, wɔsi wɔn ntoma wɔ Kristo mogya no mu, wɔnyɛ ahobraseɛ na wɔnyi ahomasoɔ ne anibereɛ mfiri wɔn so, na wɔnni dwuma a ɛtene—Odwanhwɛfo Pa no frɛ ne nkurɔfoɔ—Wɔn a wɔdi dwuma bɔne no yɛ ɔbonsam mma—Alma di adanseɛ sɛ ne nkyerɛkyerɛ no yɛ nokware na ɔhyɛ nnipa sɛ wɔnsakyera—Wɔbɛtwerɛ ateneneefoɔ no din wɔ nkwa nwoma no mu. Bɛyɛ mfinhyia 83 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Wɔte asɔre a ɛwɔ Sarahɛmla no ho na wɔhyehyɛ ɛmu dwumadie yie—Alma kɔ Gideon kɔka nsɛmpa no. Bɛyɛ mfinhyia 83 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Mary bɛwo Kristo—Ɔbɛsane owuo mpokyerɛ na wasoa ne nkurɔfoɔ bɔne—Wɔn a wɔsakyera no, wɔbɔ wɔn asu, na wɔdi mmaransɛm no so bɛnya nkwa a ɛnni awieɛ—Adeɛ biara a ɛho nte no ntumi nni Onyankopɔn aheman no—Ahobraseɛ, gyedie, anidasoɔ, ne ɔdɔ mapa na ɛhia. Bɛyɛ mfinhyia 83 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Alma ka asɛmpa na ɔbɔ asu wɔ Melek—Wɔpo no wɔ Amonaeha na ɔfiri hɔ—Ɔbɔfoɔ hyɛ no sɛ ɔnsan na ɔnkɔbɔ nsakyeraɛ ho dawuro nkyerɛ nkurɔfoɔ no—Amulek gye no, na wɔn mmienu ka asɛmpa no wɔ Amonaeha. Bɛyɛ mfinhyia 82 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Alma hyɛ nkurɔfoɔ a wɔwɔ Amonaeha sɛ wɔn nsakyera—Awurade bɛhunu Lamanfoɔ mmɔbɔ wɔ nna ɛdi akyire no mu—Sɛ Nifaefoɔ po ɛhan no a, Lamanfoɔ bɛsɛe wɔn—Ɛrenkyɛ na Onyankopɔn Ba no aba—Ɔbɛdi ama wɔn a wɔsakyera, na wɔbɔ wɔn asu, na wɔwɔ gyedie wɔ ne din mu. Bɛyɛ mfinhyia 82 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Lihae yɛ Manase aseni—Amulek ka ɔbɔfoɔ no hyɛ a ɔhyɛɛ no sɛ ɔnhwɛ Alma no—Ateneneefoɔ mpaebɔ ma wɔnsɛe nkurɔfoɔ no—Mmaranimfoɔ ne atɛmmuafoɔ a wɔntene twa fapem to hɔ ma nkurɔfoɔ no sɛee. Bɛyɛ mfinhyia 82 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Ɔkyerɛkyerɛ Nifaefoɔ sikasɛm mu—Amulek ne Seesrom yɛ akasakasa—Kristo nnye nkurɔfoɔ wɔ wɔn bɔne mu—Wɔn a wɔbɛnya ɔsoro aheman adi no nko ara na wɔbɛgye wɔn nkwa—Nnipa nyina ara de honamdua a ɛnnwuo no bɛsɔre—Owuo biara nni wusɔreɛ akyiri. Bɛyɛ mfinhyia 82 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Alma ne Seesrom di apereapereɛ—Wɔn a wɔyɛ agyedifoɔ no nko ara na wɔbɛnya Onyankopɔn asumasɛm—Deɛ nnipa dwene, ne wɔn gyedie, wɔn nsɛm, ne wɔn nwuma na wɔbɛgyina so abu wɔn atɛn—Atirimuɔdenfoɔ bɛwu honhom mu wuo—Saa honamdua wuo asetena a yɛwɔ mu yi yɛ nsɔhwɛ mmerɛ tebea—Dima ho nhyehyɛeɛ no ma owusɔreɛ ba mu na ɛnam gyedie so na bɔnefakyɛ ba—Ɛnam ɔba a ɔwo no korɔ no so bɛhunu wɔn a wɔasakyera no mmɔbɔ. Bɛyɛ mfinhyia 82 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Onyankopɔn nam nnipa gyedie mmorosoɔ ne wɔn nwuma pa so frɛ wɔn sɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ—Ɛwɔ sɛ wɔkyerɛkyerɛ mmaransɛm no—Wɔnam teneneeyɛ mu te wɔn ho na wɔba Awurade ahomegyeɛ mu—Na Melkisedek yɛ wɔn mu baako—Abɔfoɔ rebɔ asɛmpa a ɛyɛ dɛ no ho dawuro wɔ asaase nyina ara so—Wɔbɛda Kristo mmaeɛ no ankasa adi. Bɛyɛ mfinhyia 82 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Wɔde Alma ne Amulek to afiase na wɔhwe wɔn—Wɔde egya hye agyedifoɔ no ne wɔn twerɛsɛm kronkron no—Awurade gye mogyadansefoɔ no wɔ animuonyam mu—Afiase afasuo no bu na ɛdwiri gu fam—Wɔgye Alma ne Amulek na wɔkum wɔn a wɔtaataa wɔn no. Bɛyɛ mfinhyia 82–81 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Alma ne Amulek kɔ Sidom kɔte asɔre—Alma sa Seesrom yareɛ, na ɔbɛka asɔre no ho—Wɔbɔ dodoɔ no ara asu na asɔre no yɛ frɔmfrɔm—Alma ne Amulek kɔ Sarahɛmla. Bɛyɛ mfinhyia 81 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Lamanfoɔ sɛe Amonaeha nkurɔfoɔ—Soram di Nifaefoɔ anim ma wɔdi Lamanfoɔ so nkonim—Alma ne Amulek ne wɔn mu dodoɔ no ara nso ka asɛmpa no—Wɔkyerɛkyerɛ sɛ ne wusɔreɛ akyiri no Kristo bɛyi ne ho adi akyere Nifaefoɔ. Bɛyɛ mfinhyia 81–77 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Mosaya mmammarima no wɔ nkɔmhyɛ honhom ne yikyerɛ honhom—Wɔpaepae mu na obiara fa ne kwan sɛ ɔrekɔbɔ asɛm no dawuro akyerɛ Lamanfoɔ no—Amon kɔ Ismael asaase so na ɔbɛyɛ ɔhene Lamonae somfoɔ—Amon gye ɔhene no nnwan nkwa na ɔkum n’atamfo wɔ Sebus asubɔntene ho. Nkyekyɛmu 1–3, bɛyɛ mfinhyia 77 ansa na wɔrebɛwo Kristo; nkyekyɛmu 4, bɛyɛ mfinhyia 91–77 ansa na wɔrebɛwo Kristo; ne nkyekyɛmu 5–39, bɛyɛ mfinhyia 91 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Ɔhene Lamonae susu sɛ Amon yɛ Honhom Kɛseɛ—Amon kyerɛkyerɛ ɔhene no deɛ ɛfa abɔdeɛ ho, sɛdeɛ Onyankopɔn ne nnipa di nkutaho, ne sɛdeɛ ɛnam Kristo so ma ɔdi ma yɛn—Lamonae gyedi na ɔhwe ase sɛ owufoɔ. Bɛyɛ mfinhyia 90 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Lamonae nya nkwa a ɛtehɔ daa hann no na ɔhunu Odimafoɔ no—Ne fiefoɔ kɔ tebea a wɔn ani nna hɔ, na dodoɔ hunu abɔfoɔ—Ɔkora Amon anwanwa kwan so—Ɔbɔ dodoɔ no ara asu na ɔte asɔre wɔ wɔn mu. Bɛyɛ mfinhyia 90 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Awurade soma Amon kɔ Midonae sɛ ɔnkɔyi ne nuanom a wɔwɔ afiase no—Amon ne Lamonae hyia Lamonae agya a ɔyɛ hene wɔ asaase no nyina ara so—Amon hyɛ ɔhene akɔkora no sɛ ɔmma kwan mma ɔnyi ne nuanom mfiri afiase. Bɛyɛ mfinhyia 90 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Aaron ka Kristo ne ne mpata no ho asɛm kyerɛ Amalɛkaefoɔ—Wɔde Aaron ne ne nuanom to afiase wɔ Midonae—Wɔyii wɔn firii afiase akyire yi no wɔkyerɛkyerɛ wɔ nhyiadan mu na wɔsakyera akra bebree—Lamonae de ɔsom ho fawohodie ma nkurɔfoɔ a wɔwɔ Ismael asaase so no. Bɛyɛ mfinhyia 90–77 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Aaron kyerɛ Lamonae agya deɛ ɛfa Abɔdeɛ ho, Adam ahweaseɛ ne dima ho nhyehyɛeɛ a ɛnam Kristo mu no ho asɛm—Ɔhene no ne ne fiefoɔ nyina ara nya adwene sakyera—Wɔkyerɛ sedeɛ wosi kyɛ asaase no mu ma Nifaefoɔ ne Lamanfoɔ. Bɛyɛ mfinhyia 90–77 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Wɔbɔ som ho fawohodie dawuro—Lamanfoɔ a wɔwɔ nsaase ne nkuropɔn nson mu sakyera—Wɔfrɛ wɔn ho Anti-Nifae-Lihaefoɔ na wɔyi wɔn firi nomee no mu—Amalɛkaefoɔ ne Amulɔnfoɔ po nokware no. Bɛyɛ mfinhyia 90–77 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Lamanfoɔ no ba Onyankopɔn nkurɔfoɔ so—Anti-Nifae-Lihaefoɔ no di dɛ wɔ Kristo mu na abɔfoɔ bɛsera wɔn. Wɔpɛ sɛ wɔwu kyɛn sɛ wɔbɛko agye wɔn ho—Lamanfoɔ no mu bebree sesaae. Bɛyɛ mfinhyia 90–77 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Lamanfoɔ atirimuɔdensɛm trɛ—Noa asefoɔ asɔfoɔ no yera sɛdeɛ Abinadae hyɛ ho nkɔm no—Lamanfoɔ bebree sakyera na wɔkɔka Anti-Nifae-Lihae nkurɔfoɔ no ho—Wɔgye Kristo di na wɔdi Mose mmara so. Bɛyɛ mfinhyia 90–77 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Amon kamfo ne ho wɔ Awurade mu—Awurade hyɛ wɔn a wɔdi nokware no den na ɔma wɔn nimdeɛ—Nnipa bɛtumi afa gyedie so de akra mpempem aba nsakyeraɛ mu—Nyankopɔn wɔ tumi nyina ara na ɔte nneɛma nyina ara ase. Bɛyɛ mfinhyia 90–77 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Awurade hyɛ Amon sɛ ɔnni Anti-Nifae-Lihae nkurɔfoɔ anim nkɔ baabi pa—Ɔhyiaa Alma no, Amon ɛdɛ ma ɔyɛ mmerɛ—Nifaefoɔ de Yesɔn asaase no ma Anti-Nifae-Lihaefoɔ—Wɔfrɛ wɔn Amon nkurɔfoɔ. Bɛyɛ mfinhyia 90–77 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Lamanfoɔ di nkoguo wɔ ɛko kɛseɛ mu—Wɔkum mpem mpem—Atirimuɔdenfoɔ bɛkɔ mmusuo a ɛnni awieɛ tebea mu; na ateneneefoɔ anya anigyeɛ a ɛnni awieɛ. Bɛyɛ mfinhyia 77–76 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Alma wɔ pɛ sɛ ɔde abɔfoɔ ahokeka bɔ nsakyeraɛ ho dawuro—Awurade de akyerɛkyerɛfoɔ ma aman nyina ara—Alma de Awurade adwuma ne Amon ne ne nuanom nkonimdie ho nya animuonyam. Bɛyɛ mfinhyia 76 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Korihɔ, a ɔyɛ anti-Kristo, di Kristo, Mpata no, ne nkɔmhyɛ honhom no ho fɛw—Ɔkyerɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn biara nni hɔ, adasamma ahweaseɛ biara nni hɔ, bɔne ho asotweɛ biara nni hɔ, ɛna Kristo nni hɔ—Alma di adanseɛ sɛ Kristo bɛba na nneɛma nyina ara kyerɛ sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ—Korihɔ bisa nsɛnkyerɛnee na ɔtɔre mmum—Ɔbonsam yii ne ho adi kyerɛɛ Korihɔ sɛ ɔbɔfoɔ no, na ɔkyerɛɛ no deɛ ɔnka—Wɔtiatia Korihɔ so na ɔwu. Bɛyɛ mfinhyia 76–74 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Alma di asɛmpatrɛsoma anim kɔgye Soramfoɔ a wɔahwe ase wɔ gyedie mu no—Soramfoɔ po Kristo, wɔgye adwene hunu a ɛwɔ eyie a Nyankopɔn yi obi no di, na wɔgyina mpeabɔ bi a wɔahyehyɛ mu nsɛm ato hɔ dada no so som—Honhom Kronkron no hyɛ asɛmpatrɛfoɔ no ma—Ɛdɛ a wɔwɔ no Kristo mu no mene wɔn amanehunu mmorosoɔ. Bɛyɛ mfinhyia 74 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Alma kyerɛkyerɛ ahiafoɔ a wɔn amanehunu abrɛ wɔn ase—Gyedie yɛ anidasoɔ ho ahotosoɔ wɔ adeɛ a yɛnhunu na ɛyɛ nokware—Alma di adanseɛ sɛ abɔfoɔ som marima, mmaa, ne nkwadaa—Alma de asɛm no toto aba ho—Ɛwɔ sɛ wɔdua na wɔma no aduanenuro—Ɛno ma ɛnyini yɛ dua na ne so na wɔte nkwa a ɛnniawieɛ aba firi. Bɛyɛ mfinhyia 74 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Senos kyerɛkyerɛɛ sɛ ɛsɛ sɛ nnipa bɔ mpaeɛ na ɔsom wɔ baabiara, na ɛnam ɔba no nti wayi ntɛmmuo afiri hɔ—Sɛnɔk kyerɛkyerɛ sɛ ɛnam Ɔba no nti wɔde ahummɔborɔ dom nnipa—Mose ama ɔba no sɛso so wɔ ɛserɛ no so. Bɛyɛ mfinhyia 74 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Amulek di adanseɛ sɛ asɛm no wɔ Kristo mu de kɔ nkwagyeɛ mu—Sɛ mpata amma a adasamma nyina ara bɛyera—Mose mmara no nyina ara kyerɛ Onyankopɔn Ba no afɔrebɔ no—Na dima ho nhyehyɛeɛ a ɛnniawieɛ no gyina gyedie ne nsakyeraɛ honam mu ne honhom mu nhyira—Saa abrabɔ yi mu na ɛwɔ sɛ nnipa siesie ne ho de hyia Onyankopɔn—Fa suro yɛ wo nkwagyeɛ ho adwuma wɔ Onyankopɔn anim. Bɛyɛ mfinhyia 74 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Asɛm pa no ka no sɛe Soramfoɔ nwuma bɔne no—Wɔpamo wɔn a wɔasakyera no, na ɛma wɔkɔka Amon nkurɔfoɔ no ho wɔ Yɛsɔn—Ɛnam nkurɔfoɔ no atirimuɔden nti no Alma di awerɛhoɔ. Bɛyɛ mfinhyia 74 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Alma di n’adwensesa ho adanseɛ kyerɛ Hɛlaman mmerɛ a ɔhunu ɔbɔfoɔ no akyire yi no—Ɔhunuu amane te sɛ ɔkra a wɔbu no fɔ; ɔbɔɔ mpaeɛ frɛɛ Yesu din, na afei Onyankopɔn woo no—Ɛdɛ a ɛyɛ dɛ hyɛ ne kra ma—Ɔhunuu abɔfoɔ bebree sɛ ɔreyi Onyankopɔn ayɛ—Wɔn a wɔanya adwensesa bebree asɔ ahwɛ ahunu sɛdeɛ wasɔ ahwɛ na wahunu no. Ɛyɛ mfinhyia 74 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Yaawa mprɛte ne twerɛsɛm bi nso asie de agye akra de aba nkwagyeɛ mu—Ɛnam Yaredfoɔ atirimuɔdensɛm nti, wɔsɛee wɔn—Ɛsɛ sɛ wɔde wɔn kokoam ntam ne apam sie nkurɔfoɔ no—Mo ne Awurade nnwendwene biribiara a mobɛyɛ ho—Sɛdeɛ Leuhonu kyerɛkyerɛɛ Nifaefoɔ no kwan no, saa ara nso na Kristo asɛm no de nnipa kɔ nkwa a ɛnniawieɛ mu. Bɛyɛ mfinhyia 74 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Wɔtaataa Siblon wɔ teneneeɛ ho—Nkwagyeɛ wɔ Kristo mu, ɔno na ɔyɛ wiase nkwa ne hann—Mo nhome moatenka so. Bɛyɛ mfinhyia 74 ansa na wɔrebɛwɔ Kristo.
Adwaman bɔne yɛ akyiwasɛm—Korianton bɔne twe Soramfoɔ firi asɛm a wɔbɛnya no ho—Kristo dima no wɔ hɔ ma nokwarefoɔ a wɔdii kan ansaana ɔredi ama no. Bɛyɛ mfinhyia 74 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Kristo ma owusɔreɛ no ba ma nnipa nyina ara—Atenenefoɔ a wɔawuwuo no kɔ paradise na atirimuɔdenfoɔ no kɔ akyirikyiri sum mu akɔtwɛn wɔn wusɔreɛ da no—Nneɛma nyina ara bɛyɛ te sɛdeɛ na ɛteɛ dada no wɔ owusɔreɛ no mu. Bɛyɛ mfinhyia 74 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Nnipa bɛnya anigyeɛ a ɛnni awieɛ anaa mɔborɔyɛ a ɛnni awieɛ tebea wɔ Owusɔreɛ no mu—Atirimuɔdensɛm nnyɛ anigyeɛ ara da—Nnipa a wɔte honam mu no ne Nyankopɔn nni twaka wɔ wiase yi mu—Nnipa biara bɛnya ne nneɛ ne ne su a na anka ɔwɔ no wɔ saa asaase yi a ɛrenkyerɛ boɔ a yɛwɔ mu yi bio wɔn tebea a biribiara bɛyɛ sɛdeɛ na ɛteɛ no. Bɛyɛ mfinhyia 74 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Honam a ɛwuo asetena yi yɛ nsɔhwɛ mmerɛ, ama nnipa atumi asakyera na wɔasom Onyankopɔn—Asehweɛ no de honam ne honhom mu wuo baa adasamma nyina ara so—Dima nam nsakyeraɛ so na ɛba—Onyankopɔn no ara de mpata asi wiase bɔne anan—Mmɔborɔ hunu wɔ hɔ ma wɔn a wɔasakyera—Nkaɛfoɔ no nyina ara hyɛ Onyankopɔn atɛntenenee ase—Ɛnam Mpata no nti na mmɔborɔhunu ba—Deɛ wasakyera ampa ara no na wɔbɛgye no nkwa. Bɛyɛ mfinhyia 74 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Alma ne ne mmammarima no ka asɛm no—Soramfoɔ ne Nifaefoɔ atuatefoɔ no mu bi bɛyɛ Lamanfoɔ—Lamanfoɔ no tu Nifaefoɔ so sa—Moronae maa Nifaefoɔ akodeɛ a wɔde bɛbɔ wɔn ho ban—Awurade da nhyehyɛeɛ a Lamanfoɔ no ayɛ no adi kyerɛ Alma—Nifaefoɔ bɔ wɔn afie, wɔn fahodie, wɔn abusua ne wɔn som ho ban—Moronae ne Lihae asraafoɔ twa Lamanfoɔ ho hyia. Bɛyɛ mfinhyia 74 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Moronae bɛhyɛ Lamanfoɔ sɛ wɔ ne wɔn mfa asomdwoeɛ apam anyɛ saa a ɔbɛsɛe wɔn—Sarahemna po nhyehyɛeɛ no, na ɔko no hyɛ aseɛ—Moronae asraafoɔ no di Lamanfoɔ no so nkonim. Bɛyɛ mfinhyia 74–73 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Helaman gye Alma nsɛm no di—Alma hyɛ Nifaefoɔ sɛee ho nkɔm—Ɔhyira na ɔdome asaase no—Ɛbia na Honhom no faa Alma sɛdeɛ ɔfaa Mose no—Akasakasa sɔre wɔ Asɔre no mu. Bɛyɛ mfinhyia 73 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Amalikaea bɔ pɔ sɛ ɔbɛnya ɔhene adi—Moronae ma fawohodie frankaa so wɔ soro—Ɔka nkurɔfoɔ no boa ano ma ɔbɔ wɔn som ho ban—Wɔfrɛ agyedifoɔ mapa no Kristofoɔ—Wɔbɛkora Yosef asefoɔ—Amalikaea ne atuatefoɔ dwane kɔ Nifae asaase so—Wɔkum wɔn a wɔmmoa mma wɔnya fawohodie no. Bɛyɛ mfinhyia 73–72 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Amalikaea fa nkontompo, awudie, ne esumase pɔ so bɛyɛ Lamanfoɔ hene—Nifaefoɔ atuatefoɔ no atirimuɔden yɛden na wɔn ho yɛ hu kyɛn Lamanfoɔ no pii. Bɛyɛ mfinhyia 72 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Amalikaea hyɛ Lamanfoɔ no takrawɔgyam ma wɔtia Nifaefoɔ—Moronae siesie ne nkurɔfoɔ ma wɔbɔ deɛ ɛma wɔyɛ Kristofoɔ no ho ban—Ɔdi dɛ wɔ ahotɔ ne fawohodie mu na ɔyɛ Onyankopɔn ɔbarima ahoɔdenfoɔ. Bɛyɛ mfinhyia 72 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Lamanfoɔ no a wɔretu nkurɔfoɔ so sa no ntumi mfa Amonaeha ne Noa nkuropɔn no a wɔabɔ ho ban no—Amalikaea dome Onyankopɔn na ɔka ntam sɛ ɔbɛnom Moronae mogya—Helaman ne ne nuanom kɔ so hyɛ asɔre no den. Bɛyɛ mfinhyia 72 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Moronae bɔ Nifaefoɔ nsaase ho ban—Wɔkyekyere nkuropɔn foforɔ bebree—Akokoakoko ne ɔsɛee baa Nifaefoɔ so wɔ wɔn atirimuɔdensɛm ne wɔn akyiwasɛm nti—Teankum di Morianton ne n’atuatefoɔ so nkonim—Nifaeha wu na ne babarima Pahoran bɛtena atɛmmuo-adwa no so. Bɛyɛ mfinhyia 72–67 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Wɔn a wɔpɛ ɔhene amanmuo di wɔn so no pɛ sɛ wɔsesa mmara no na wɔsi ɔhene—Pahoran ne fawohodiefoɔ no nya mmoa firi nkurɔfoɔ no hɔ—Moronae hyɛ wɔn a wɔpɛ ɔhene amanmuo no sɛ wɔmmɔ wɔn man ho ban, anyɛ saa a wɔbɛkum wɔn—Amalikaea ne Lamanfoɔ no fa nkuropɔn bebree a wɔabɔ ho ban—Teankum pamo Lamanfoɔ a wɔbɔ ntoa no na ɔkum Amalikaea wɔ ne ntomadan mu. Bɛyɛ mfinhyia 67–66 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Amoron di Amalikaea adeɛ na ɔdi Lamanfoɔ so hene—Moronae, Teankum ne Lihae di Nifaefoɔ anim ma wɔne Lamanfoɔ no ko di wɔn so nkonim—Wɔsan gye Mulɛk kuropɔn no, na Wɔkum Yakob Soramni no. Bɛyɛ mfinhyia 66–64 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Wɔde Lamanfoɔ nnɛduafoɔ no bɔɔ Dodoɔ kuro no ho ban—Atuateɛ a ɛwɔ Nifaefoɔ mu no ma Lamanfoɔ no di nkonim—Helaman hwɛ Amom nkuropɔn no mmeranteɛ mpem mmienu no so. Bɛyɛ mfinhyia 64–63 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Amoron ne Moronae tena ase dwendwene wɔn nnɛduafoɔ no a wɔpɛ sɛ ɔde wɔn di nsesa no ho—Moronae hwehwɛ sɛ Lamanfoɔ bɛtwe wɔn ho na wɔgyaee sɛ wɔtohyɛ wɔn so kum wɔn no—Amoron hwehwɛ sɛ Nifaefoɔ no de wɔn akodeɛ bɛgu hɔ na wɔbɛhyɛ Lamanfoɔ no ase. Bɛyɛ mfinhyia 63 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Moronae apene so sɛ ɔbɛsesa nnɛduafoɔ—Wɔde nsa daadaa Lamanfoɔ awɛnfoɔ no ma ɔboro, na wɔyi Nifae nnɛduafoɔ no firi afiase—Wɔfa Gid kuropɔn no mmerɛ a wanka mogya angu. Bɛyɛ mfinhyia 63–62 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Hɛlaman de krataa kɔma Moronae, kyerɛ sɛdeɛ wɔne Lamanfoɔ no ko no teɛ—Antipus ne Hɛlaman di nkonim kɛseɛ wɔ Lamanfoɔ no so—Hɛlaman mmeranteɛ mpem mmienu no de tumi kɛseɛ a ɛyɛ nnwanwa ko na wɔankum wɔn mu biara. Nkyekyɛmu I, bɛyɛ mfinhyia 62 ansa na wɔrebɛwo Kristo; nkyekyɛmu 2–19, bɛyɛ mfinhyia 66 ansa na wɔrebɛwo Kristo; ne nkyekyɛmu 20–57, bɛyɛ mfinhyia 65–64 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Helaman ka Antiparu mfaɛ ne wɔn ho a wɔde maae, na akyire yi wɔkɔbɔ Kumenae ho ban ho asɛm—Ne mmeranteɛ Amonfoɔ no ko akokoɔduro so; na wɔpirapira wɔn nyina ara, na mmom wɔankum wɔn mu biara—Gid ka Lamanfoɔ nnɛduafoɔ no kumeɛ ne wɔn dwanee ho asɛm. Bɛyɛ mfinhyia 63 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Helaman, Gid ne Teamno de nyansakwan fa Mantae kuropɔn no—Lamanfoɔ twe san—Amon nkurɔfoɔ no mmammarima no Nyankopɔn kora wɔn mmerɛ a wɔgyina pintinn sɛ wɔde rebɔ wɔn fawohodie ne gyedie ho ban. Bɛyɛ mfinhyia 63–62 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Moronae ka kyerɛ Pahoran sɛ ɔmfa asraafoɔ nkɔboa Hɛlaman—Lamanfoɔ no fa Nifaeha—Moronae bo fu aban no. Bɛyɛ mfinhyia 62 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Moronae kasa fa aban no ani a wabu agu asraafoɔ so ho kyerɛ Pahoran—Awurade ma kwan ma wɔkum ateneneefoɔ—Ɛwɔ sɛ Nifaefoɔ no de wɔn tumi nyina ara, na wɔfa ɔkwan biara so de gye wɔn ho firi wɔn atamfo nsam—Moronae hunahuna aban no sɛ, sɛ wamfa mmoa ammerɛ n’asraafoɔ no a, ɔbɛba ne so ne no abɛko. Bɛyɛ mfinhyia 62 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Pahoran ka sɛdeɛ nkurɔfoɔ no asɔre atia na wɔatwe akodeɛ de atia aban no kyerɛ Moronae—Wɔn a wɔpɛ ɔhene amammuo no fa Sarahɛmla nnɔmum na wɔne Lamanfoɔ no yɛ koro—Pahoran serɛ asraafoɔ dɔm a wɔbɛboa no ama ɔne atuatefoɔ no ako. Bɛyɛ mfinhyia 62 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Moronae si mu sɛ ɔrekɔboa Pahoran wɔ Gideon asaase so—Wɔkum wɔn a wɔpɛ ɔhene amanmuo no a wɔmpɛ sɛ wɔbɔ wɔn man ho ban no—Pahoran ne Moronae san gye Nifaeha—Lamanfoɔ bebree bɛka Amon nkurɔfoɔ ho—Teankum kum Amoron na wɔkum ɔno nso—Wɔpamo Lamanfoɔ firi asaase no so, na ɔma asomdwoeɛ ba—Helaman san bɛyɛɛ n’asɔfodwuma na ɔte Asɔre. Bɛyɛ mfinhyia 62–57 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Siblon ɛna akyire yi nso Hɛlaman na twerɛtohɔsɛm kronkron no bɛdi wɔn nsa mu. Nifaefoɔ bebree tu kwan kɔ asaase a ɛda atifii no so—Hegat pam ahyɛn, a ɛkɔ ɛpo a ɛda atɔɛ afa mu no so—Moronaeha di Lamanfoɔ so nkonim wɔ ɛko mu. Bɛyɛ mfinhyia 56–52 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Pahoran a ɔtɔ so mmienu bɛyɛ ɔtɛmmuafoɔ panin na Kiskumen kum no—Pakumenae bɛtena atɛmmuo-adwa no so—Koriantuma di Lamanfoɔ asraadɔm no anim, ɔfa Sarahɛmla, na ɔkum Pakumenae—Moronaeha di Lamanfoɔ so nkonim na ɔsan fa Sarahɛmla, na ɔkum Koriantuma. Bɛyɛ mfinhyia 52–50 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Helaman, Hɛlaman babarima no, bɛyɛ ɔtɛmmuafoɔ panin—Gadianton bɛyɛ Kiskumen kuo no kandifoɔ—Helaman somfoɔ kum Kiskumen, na Gadianton kuo no dwane kɔ ɛserɛ no so. Bɛyɛ mfinhyia 50–49 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Nifaefoɔ dodoɔ no ara tu kɔtena asaase no a ɛwɔ atifii afa mu no—Wɔde simɛnti sisi adan na wɔde twerɛtohɔsɛm bebree sie—Wɔsakyera mpempem na wɔbɔ wɔn asu—Onyankopɔn asɛm no de nnipa kɔ nkwagyeɛ mu—Nifae a ɔyɛ Hɛlaman babarima no tena atɛmmuo-adwa no so. Bɛyɛ mfinhyia 49–39 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Nifae atewohofoɔ ne Lamanfoɔ ka asraafoɔ bɔ mu na wɔfa Sarahɛmla asaase no—Nifaefoɔ nkoguo ba ɛnam wɔn atirimuɔden nti—Asɔre no mpuntuo tɔ sini, na emu nkurɔfoɔ no yɛ mmerɛ sɛ Lamanfoɔ no. Bɛyɛ mfinhyia 38–30 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Nifae ne Lihae tu wɔn ho si hɔ ma nsɛmpaka—Wɔn din hyɛ wɔn nkuran ma wɔbɔ wɔn bra sɛ wɔn adikanfoɔ—Kristo di ma wɔn a wɔsakyeraae—Nifae ne Lihae sesa nnipa bebree, na wɔde wɔn to afiase, na egya twa wɔn ho hyia—Esum kabii kata nnipa aha mmiɛnsa so—Asaase woso na ɛnne bi hyɛ nnipa sɛ wɔnsakyera—Nifae ne Lihae ne abɔfoɔ di nkutaho, na egya twa nkurɔfokuo ho hyia. Bɛyɛ mfinhyia 30 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Lamanfoɔ ateneneefoɔ no ka nsɛmpa no kyerɛ Nifaefoɔ mu atirimuɔdenfoɔ—Saa nnipa kuo mmienu no yɛ frɔmfrɔm wɔ mmerɛ a na wɔte asomdwoeɛ mu na wɔnyaa nneɛma ne aduane pii no—Lusifa, deɛ ɔde bɔne baaɛ no, kanyan atirimuɔdenfoɔ ne Gadianton adwotwafoɔ no akoma wɔ awudie ne atirimuɔdensɛm mu—Adwotwafoɔ no tu Nifaefoɔ aban no gu. Bɛyɛ mfinhyia 29–23 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Nkurɔfoɔ a wɔwɔ atifi afa mu no poo Nifae, na ɔsan ba Sarahɛmla—Ɔbɔ mpaeɛ wɔ abantentene no a ɛwɔ ne turo mu no so, na ɔsrɛ nkurɔfoɔ no sɛ wɔnsakyera anyɛ saa a wɔbɛyera. Bɛyɛ mfinhyia 23–21 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Atɛmmuafoɔ porɔɛfoɔ hyɛ nkurɔfoɔ no takrawɔgyam ma wɔsɔre tia Nifae—Abraham, Mose, Senos, Sɛnɔk, Esias, Yesaia, Yeremia, Lihae, ne Nifae nyina ara di Kristo ho adanseɛ—Nifae nam nkuranhyɛ so bɔ ɔtɛmmuafoɔ panin no wuo ho dawuro. Bɛyɛ mfinhyia 23–21 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Asomafoɔ hunu sɛ ɔtɛmmuafoɔ panin no awu wɔ atɛmmuo-adwa no so—Wɔde wɔn to afiase na akyire yi no wɔyi wɔn—Nifae nam nkenyan so tumi kyerɛ sɛ Seantum ne saa owudini no—Wɔn mu bi gye Nifae to mu sɛ nkɔmhyɛni. Bɛyɛ mfinhyia 23–21 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Awurade ma Nifae nsɔano tumi—Wɔma no tumi a ɔde kyekyere na ɔde sane wɔ asaase yi so ne ɛsoro—Ɔhyɛ nkurɔfoɔ no sɛ wɔnsakyera anaa sɛ wɔbɛyera—Honhom no ma no so firi nkurɔfokuo mu kɔ nkurɔfokuo mu. Bɛyɛ mfinhyia 21–20 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Nifae kyerɛ Awurade deɛ nti a ɛwɔ sɛ ɔde ɛkɔm hyɛ wɔn ako no anan mu—Nkurɔfoɔ bebree yera—Wɔsakyera, na Nifae srɛ Awurade dendennden sɛ ɔma nsuo ntɔ—Nifae ne Lihae nya yikyerɛ bebree—Gadianton adwotwafoɔ no gye nhini wɔ asaase no so. Bɛyɛ mfinhyia 20–26 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Nnipa sesa, na wɔyɛ nkwaseafoɔ na wɔyɛ bɔne ntɛmntɛm—Awurade tea ne nkurɔfoɔ—Wɔde nnipa a wɔsɛhwee toto Onyankopɔn tumi ho—Atɛmmuda na nnipa bɛnya nkwa a ɛtehɔ daa anaa sɛ ɛfɔbuo a ɛtehɔ daa. Bɛyɛ mfinhyia 6 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Samuel, Lamanni no hyɛ nkɔm sɛ sɛ Nifaefoɔ no ansakyeraɛ a wɔbɛsɛe wɔn—Wɔdome wɔn ne wɔn ahonyadeɛ—Wɔpo na wɔsi nkɔmhyɛfoɔ no aboɔ, honhom bɔne twa wɔn ho hyia, na wɔhwehwɛ anigyeɛ wɔ amumuyɛ mu. Bɛyɛ mfinhyia 6 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Samuel ka ma ɛba mu sɛ kanea bɛpue anadwo nansoroma foforɔ bɛpue wɔ Kristo awoɔ mu—Kristo dima nnipa firi honam ne honhom mu wuo mu—Ne wuo ho nsɛnkyerɛnee ɛne nansa a ɛsum bɛba, abotan a ɛbɛpaepae, ne awerɛhosɛm a ɛbɛsie wɔ asaase yi so. Bɛyɛ mfinhyia 6 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Awurade tea Nifaefoɔ, ɛfiri sɛ na ɔdɔ wɔn—Lamanfoɔ a wɔsakyeraae no nhinhim na ɔgyina pintinn wɔ gyedie mu—Awurade bɛhunu Lamanfoɔ mmɔbɔ wɔ nna a edi akyire no mu. Bɛyɛ mfinhyia 6 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
Nifae bɔ Nifaefoɔ a wɔgye Samuel di no asu—Nifaefoɔ no a wɔnsakyeraɛ da no rentumi mfa wɔn agyan ne aboɔ nkum Samuel—Wɔn mu bi yɛ wɔn akoma den, na ebinom nso hunu abɔfoɔ—Wɔn a wɔnnye nni no ka sɛ ɛnyɛ nyansasɛm sɛ obi bɛgye Kristo ne ne Yerusalem maɛ no adi. Bɛyɛ mfinhyia 6–1 ansa na wɔrebɛwo Kristo.
3 Nifae 1
Nifae, Hɛlaman babarima no, firi asaase no so, na ɔne ne babarima Nifae kora twerɛtohɔnsɛm no—Ɛwɔ mu sɛ na nsɛnkyerɛnee ne anwanwadeɛ adɔɔso deɛ, nso na atirimuɔdenfoɔ no rehwehwɛ sɛ wɔbɛkum ateneneefoɔ no—Anadwo no a ɔbɛwo Kristo no duru—Wɔda sɛnkyerɛnee adi, na nsoroma foforɔ pue—Atrɔsɛm ne naadaa dɔɔso, na Gadianton adwotwafoɔ no kumkum nnipa bebree. Bɛyɛ mfinhyia 1–4 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 2
Atirimuɔdensɛm ne akyiwasɛm dɔɔso wɔ nkurɔfoɔ no mu—Nifaefoɔ ne Lamanfoɔ bɔ mu bɔ wɔn ho ban tia Gadianton adwotwafoɔ no—Lamanfoɔ no a wɔadane no bɛyɛ fitaa na wɔfrɛ wɔn Nifaefoɔ. Bɛyɛ mfinhyia 5–16 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 3
Gidianhae, Gadianton ɔkandifoɔ no, hwehwɛ sɛ Lakɔneus ne Nifaefoɔ no bɛgyae wɔn ho ne wɔn nsaase mu ama wɔn—Lakoneus si Gidgidonae asraafoɔ no sahene panin—Nifaefoɔ no hyia mu wɔ Sarahɛmla ne Dodoɔ hɔ sɛ wɔrebɔ wɔn ho ban. Bɛyɛ mfinhyia 16–18 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 4
Nifaefoɔ asraafoɔ no di Gadianton adwotwafoɔ no so nkonim—Wɔtwa Gidianhae tiri, na wɔsɛnn Semnariha a ɔdii n’adeɛ no—Nifaefoɔ no yi Awurade ayɛ wɔ wɔn nkunimdie no ho. Bɛyɛ mfinhyia 19–22 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 5
Nifaefoɔ no sakyera na wɔpa wɔn bɔne akyi—Mormon twerɛ ne nkurɔfoɔ no ho abakɔsɛm na ɔka asɛm a ɛtehɔ daa no kyerɛ wɔn—Wɔbɛboa Israel ano afiri mmerɛ tentene a wɔabɔ apete no mu. Bɛyɛ mfinhyia 22–26 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 6
Nifaefoɔ no yɛ frɔmfrɔm—Ahomasoɔ, ahonyadeɛ, na nyiyimu sɔre wɔ wɔn mu—Akyinnyeɛ de mpaepaemuu ba Asɔre no mu—Satan di nkurɔfoɔ no anim ma wɔte atua—Nkɔmhyɛfoɔ bebree bɔ nsakyeraɛ ho dawuro—Wɔn a wɔdii wɔn awu no bɔ pɔ sɛ wɔbɛtu aban no agu. Bɛyɛ mfinhyia 26–30 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 7
Wɔkum ɔtɛmmuafoɔ panin no, wɔsɛe aban no, na nkurɔfoɔ no kyekyɛ wɔn mu mmusua akuokuo mu—Yakob, anti-Kristo no, bɛyɛ ɔhene wɔ kokoa mu kuo bi so—Nifae ka nsakyeraɛ ne gyedie a ɛwɔ Kristo mu ho asɛm—Abɔfoɔ bɛsom no dabiara, na ɔnyane ne nuabarima firi awufo mu—Nnipa bebree sakyera na wɔbɔ wɔn asu. Bɛyɛ mfinhyia 30–33 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 8
Ahum, asaase wosoɔ, egya, kyinhyia mframa, ne atoyerɛnkyɛm di Kristo asɛnuamubɔ no ho adanseɛ—Wɔsɛe nnipa bebree—Esum kata asaase so nansa—Wɔn a wɔka no di wɔn gyinaberɛ ho awerɛhoɔ. Bɛyɛ mfinhyia 33–34 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 9
Kristo nne teaa mu kaa nnipa bebree ne nkuropɔn bebree sɛee ho asɛm ɛnam wɔn atirimuɔdensɛm nti wɔ sum mu—Ɔtea mu nso ka sɛ ɔyɛ Onyankopɔn ba, ɔda no adi sɛ Mose mmara no ahyɛ ma, na ɔto nsa frɛ nnipa sɛ wɔmmra ne hɔ na ɔnye wɔn nkwa. Bɛyɛ mfinhyia 34 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 10
Asaase no so yɛ dinn dɔnhwere bebree ntam—Kristo nne hyɛ bɔ sɛ ɔbɛboaboa ne nkurɔfoɔ ano sɛdeɛ akokɔbedeɛ boaboa ne mma ano no—Wɔn a wɔyɛ ateneneefoɔ ara yie wɔ nkurɔfoɔ no mu no na wɔakora wɔn. Bɛyɛ mfinhyia 34–35 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 11
Agya no di ne Dɔba no ho adanseɛ—Kristo pue na ɔbɔ ne mpata no ho dawuro—Nkurɔfoɔ no de wɔn nsa ka ne kutwa a ɛwɔ ne nsa mu ne ne nan ne ne mfe mu no—Wɔtea mu sɛ Hosanna—Ɔkyerɛ sɛdeɛ wɔnsi mɔ asu—Apereapereɛ honhom no firi ɔbonsam—Kristo nkyerɛkyerɛ no ne sɛ nnipa bɛnya gyedie na wɔbɔ wɔn asu, na wɔagye Honhom Kronkron no. Bɛyɛ mfinhyia 34 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 12
Yesu frɛ nwomanimfoɔ Dumiemu no de tumi ne akwanya hyɛ wɔn nsa—Ɔka nsɛm a ɛte sɛ Bepɔ no so asɛnka no kyerɛ Nifaefoɔ no—Ɔka nhyira nsɛm no—Ne nkyerɛkyerɛ no boro Mose mmara no so na ɛho hia kyɛn no—Ɔhyɛ nnipa sɛ wɔnyɛ pɛ mpo sɛdeɛ ɔne n’Agya yɛ pɛ no—Fatoto Mateo 5 ho. Bɛyɛ mfinhyia 34 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Yesu kyerɛ Nifaefoɔ no Awurade mpaebɔ—Ɛwɔ sɛ wɔhyehyɛ adanmudeɛ wɔ soro—Wɔhyɛ Dumienu no sɛ mma wɔnwendwene honam mu nneɛma ho wɔ wɔn nyamedwuma mu—Fatoto Mateo 6 ho. Bɛyɛ mfinhyia 34 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 14
Yesu hyɛ sɛ: Mma mommu atɛn; momisa Onyankopɔn; monhwɛ yie wɔ nkɔmhyɛfoɔ atorɔfoɔ ho—Ɔde nkwagyeɛ hyɛ wɔn a wɔyɛ Agya no pɛ no bɔ—Ntoto Mateo 7 ho. Bɛyɛ mfinhyia 34 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 15
Yesu de to dwa sɛ Mose mmara no ahyɛ ma wɔ ne mu—Nifaefoɔ no yɛ adwan nkaaɛ no a ɔkaa ho asɛm wɔ Yerusalem no—Ɛnam amumuyɛsɛm nti, Awurade nkurɔfoɔ no a wɔwɔ Yerusalem no nnim Israel nnwan no a wɔabɔ wɔn apete no. Bɛyɛ mfinhyia 34 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 16
Yesu bɛkɔ akɔsera Israel nnwan nkaaɛ a wɔayera no—Nna a ɛdi akyire no mu no asɛmpa no bɛkɔ Amanamanmufoɔ no hɔ na afei akɔ Israel fiefoɔ no hɔ—Awurade nkurɔfoɔ no ani bɛtua sɛ ɔde Sion bɛba bio. Bɛyɛ mfinhyia 34 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 17
Yesu se nkurɔfoɔ no sɛ wɔn nnwendwene ne nsɛm no ho na wɔmɔ mpaeɛ sɛ wɔbɛte aseɛ—Ɔsa wɔn ayarefoɔ no yareɛ—Ɔde kasa a nipa biara ntumi ntwerɛ bɔ mpaeɛ ma nkurɔfoɔ no—Abɔfoɔ som wɔn na egya twa wɔn nkwadaa ho hyia. Bɛyɛ mfinhyia 34 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 18
Yesu hyehyɛ Awurade adidie no wɔ Nifaefoɔ no mu—Ɔhyɛ wɔn sɛ wɔmɔ mpaeɛ mmerɛ biara wɔ ne din mu—Ɔbu wɔn a wɔn ho nte na wɔdi ne honam na wɔnom ne mogya no fɔ—Ɔma n’akyidifoɔ no tumi a wɔde Honhom Kronkron no ma. Bɛyɛ mfinhyia 34 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 19
Akyidifoɔ dumienu no som nkurɔfoɔ no na wɔbɔ mpaeɛ bisa Honhom Kronkron no—Wɔbɔ akyidifoɔ dummienu no asu na wɔnya Honhom Kronkron no, ne ɔsoroabɔfoɔ som no—Yesu de nsɛm a obiara ntumi ntwerɛ no bɔ mpaeɛ—Ɔdi gyedie kɛseɛ a saa Nifaefoɔ yi wɔ ho adanseɛ. Bɛyɛ mfinhyia 34 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 20
Yesu ma paanoo ne bobesa a na ɛyɛ nsɛnkyerɛnee a ɛyɛ hu, na ɔmaa nkurɔfoɔ no Awurade adidie—Yakob abɛhunu Awurade wɔn Nyankopɔn no ho nimdeɛ na wɔbɛdi Amerika asaase no—Yesu yɛ ɔkɔmhyɛni a ɔtesɛ Mose no, na Nifaefoɔ no yɛ nkɔmhyɛfoɔ no mma—Ɔbɛboaboa Awurade nkurɔfoɔ nkaaɛ no ano de wɔn akɔ Yerusalem. Bɛyɛ mfinhyia 34 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 21
Sɛ Mormon nwoma no ba a ɔbɛboaboa Israel ano a—Ɔbɛma Amanamanmufoɔ no atena Amerika sɛ fawohodiefoɔ—Sɛ wɔgyedi na wɔyɛ setie a ɔbɛgye wɔn nkwa; anyɛ saa a ɔbɛtwa wɔn atwene na wasɛe wɔn—Israel bɛkyekyere Yerusalem Foforɔ no, na abusuakuo no a wɔayera no bɛsan aba. Bɛyɛ mfinhyia 34 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 22
Wɔbɛkyekyere Sion ne ne ntomadan nnua no, na ɔnam ahummɔborɔ ne mmerɛyɛ so bɛboa Israel ano—Wɔbɛdi nkunim—Fatoto Yesaia 54 ho. Bɛyɛ mfinhyia 34 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 23
Yesu gye Yesaia nsɛm no to mu—Ɔhyɛ nkurɔfoɔ no sɛ wɔnhwehwɛ nkɔmhyɛfoɔ no—Wɔde Samuel a ɔyɛ Lamanni no nsɛm a ɛfa owusɔreɛ ho no ka wɔn twerɛtohɔsɛm ho. Bɛyɛ mfinhyia 34 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 24
Awurade bɔfoɔ no bɛsiesie kwan no ama Mmaeɛ a ɛtɔ so Mmienu no—Kristo bɛtena atɛmmuo mu—Ɔhyɛ Israel sɛ ɔntua ntotosoɔ du du ne afɔrebɔ toɔ no—Ɔkoraa nkaeɛ nwoma no—Fatoto Malaki 3 ho. Bɛyɛ mfinhyia 34 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 25
Mmaeɛ a ɛtɔ so Mmienu no mu no, ɔbɛhye ahomasoɔfoɔ ne atirimuɔdenfoɔ te sɛ aburo dwanee dua—Elia bɛsan aba ansaana saa da kɛseɛ a ɛyɛ hu no aba—Fatoto Malaki 4 ho. Bɛyɛ mfinhyia 34 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 26
Yesu kyerɛkyerɛ nneɛma nyina ara mu fiti mfitiaseɛ kɔsi awieɛ—Nkokoa ne mofra ka nsɛm a ɛyɛ nnwanwa a obi ara ntumi ntwerɛ—Wɔn a wɔwɔ Kristo Asɔre no mu nneɛma nyina ara yɛ wɔn nyina ara deɛ. Bɛyɛ mfinhyia 34 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 27
Yesu hyɛ wɔn sɛ wɔmfa ne din mfrɛ Asɔre no—Ne dwumadie ne ne mpata afɔrebɔ no na ɛbɔmu yɛ n’asɛmpa no—Wɔhyɛ nnipa sɛ wɔnsakyeraɛ na wɔnbɔ wɔn asu ama Honhom Kronkron no ate wɔn ho—Ɛwɔ sɛ wɔyɛ sɛdeɛ Yesu mpo teɛ no. Bɛyɛ mfinhyia 34–35 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 28
Dumienu no mu nkron a wɔwɔ ɔpɛ no nya bɔhyɛ sɛ wɔwɔ a Kristo ahennie no bɛyɛ wɔn agyapadeɛ—Nifaefoɔ mmiɛnsa no a wɔwɔ ɔpɛ no, ɔma wɔn tumi wɔ owuo so, ama wɔka asaase yi so kɔsi sɛ Yesu bɛba bio—Wɔmaa wɔn so kɔɔ soro a wɔhunu nneɛma a mmara mma ho kwan sɛ wɔka, na afei wɔresom wɔ nnipa mu. Bɛyɛ mfinhyia 34–35 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 29
Mormon Nwoma no maeɛ no yɛ nsɛnkyerɛnee sɛ Awurade ahyɛ aseɛ rebɛboaboa Israel ano na n’apam no nso hyɛ ma—Wɔbɛdome wɔn a wɔpo ne nna a ɛdi akyire no yikyerɛ ne n’akyɛdeɛ no. Bɛyɛ mfinhyia 34–35 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
3 Nifae 30
Wɔhyɛ Amanamanmufoɔ a wɔwɔ nna a ɛdi akyire yi mu no sɛ wɔnsakyera, na wɔmmra Kristo hɔ, na wɔnkan wɔn mfra Israel fiefoɔ no ho. Bɛyɛ mfinhyia 34–35 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Nifaefoɔ ne Lamanfoɔ no nyina ara dane ba Awurade hɔ—Na wɔn nneɛma nyina ara bɛyɛɛ wɔn nyina ara dea, wɔyi nkɔnyaa, na wɔyɛ frɔmfrɔm wɔ asaase no so—Mfie ahanu akyiri no mpaepaemuu, bɔne, atorɔ asɔreasɔre ne ɔtaataa sɔre wɔ wɔn mu—Mfie ahasa akyiri no, Nifaefoɔ ne Lamanfoɔ nyina ara bɛyɛ atirimuɔdenfoɔ—Amaron de twerɛtohɔsɛm kronkron no sie. Bɛyɛ mfinhyia 35–321 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Amaron maa Mormon akwankyerɛ a ɛfa twerɛtohɔsɛm kronkron no ho no—Ɛko hyɛ aseɛ wɔ Nifaefoɔ ne Lamanfoɔ ntam—Ɔfa Nifaefoɔ mmiɛnsa no kɔ—Atirimuɔdensɛm, akyinnyeɛ, ntafoayie ne abayisɛm bɛbuui. Bɛyɛ mfinhyia 321–326 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Mormon di Nifae asraafoɔ no anim—Mogya ne nnipakum trɛ asaase no so—Nifaefoɔ no twa adwo na wɔdi abooboo wɔ afɔdifoɔ awerɛhodie ho—Wɔn adom da atwa mu—Mormon nsa ka Nifae mprɛte no—Akokoakoko kɔ so. Bɛyɛ mfinhyia 327–350 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Mormon bɔ nsakyeraɛ ho dawuro kyerɛ Nifaefoɔ no—Wɔdi nkonim kɛseɛ na wɔnya animuonyam wɔ wɔn ankasa wɔn mmɔdenmɔ mu—Mormon ampene so sɛ ɔdi wɔn anim, na ne mpaeɛ a ɔbɔ ma wɔn no gyedie nni mu—Mormon Nwoma no to nsa frɛ Israel abusua dumienu no sɛ wɔnye asɛmpa no ni. Bɛyɛ mfinhyia 360–362 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Ɛko ne nnipa kum kɔ so—Atirimuɔdenfoɔ twe atirimuɔdenfoɔ aso—Atirimuɔdensɛm kɛseɛ bu kyɛn deɛ asi pɛn wɔ Israel nyina ara—Wɔde mmaa ne nkwadaa bɔ afɔreɛ ma abosom—Lamanfoɔ no hyɛ aseɛ sɛ wɔrepamo Nifaefoɔ no afiri wɔn anim. Bɛyɛ mfinhyia 363–375 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Mormon di Nifaefoɔ asraafoɔ no anim kɔ ɛko a ɛyɛ mogya ne nnipa kum.—Mormon nwoma no bɛba ama Israel nyina ara agye adi sɛ Yesu ne Kristo no—Ɛnam wɔn akyinnyeɛ nti, wɔbɛbɔ Lamanfoɔ no ahwete, na Honhom no bɛgyae sɛ ɛne wɔn bɛtena—Wɔn nsa bɛka asɛmpa no afiri Amanamanmufoɔ no hɔ nna a ɛdi akyire no mu. Bɛyɛ mfinhyia 375–384 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Nifaefoɔ no boa wɔn ano wɔ Kumora asaase so sɛ wɔrebɛkɔ sa a ɛtwa toɔ—Mormon de twerɛtohɔsɛm kronkron no sie wɔ Kumora pampa no mu—Lamanfoɔ no di nkonim, na wɔsɛe Nifaefoɔ man no—Nnipa no mu ahampem mpem na wɔde akofena kum wɔn. Bɛyɛ mfinhyia 385 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Mormon to nsa frɛ Lamanfoɔ no sɛ wɔnnye Kristo nni wɔ nna a ɛdi akyire yi, na ɔnnye ne asɛmpa no nto mu, na ɔbɛgye wɔn nkwa—Wɔn a wɔgye Twerɛ Kronkron no die no bɛgye Mormon nwoma no nso adi. Bɛyɛ mfinhyia 385 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Lamanfoɔ no hwehwɛ Nifaefoɔ no asɛe wɔn—Mormon Nwoma no nam Onyankopɔn tumi so bɛba—Musuo bɛba wɔn a wɔhome abufuo ne akasakasa tia Awurade adwuma no—Nifaefoɔ twerɛtohɔsɛm no bɛba ɛda a atirimuɔdensɛm, abɔnesɛm ne gyedie ahweaseɛ mmerɛ no mu. Bɛyɛ mfinhyia 400–421 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Moronae srɛ wɔn a wɔnnye Kristo nni no sɛ wɔn nsakyera—Ɔbɔ Onyankopɔn a ɔyɛ nkɔnyaa no a ɔma adiyisɛm na ɔhwie akyɛdeɛ ne nsɛnkyerɛnee gu nokwaredifoɔ so no ho dawuro—Nkɔnyaa rensi bio ɛnam sɛ wɔnnye Onyankopɔn nni no nti—Nsɛnkyerɛnee di wɔn a wɔgyedie no akyiri—Ɔtu nnipa fo sɛ wɔnyɛ anyansafoɔ na wɔni mmaransɛm no so. Bɛyɛ mfinhyia 401–421 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Moronae twitwa Eter nsɛm no so ntiatia—Wɔda Eter abusuasantene no adi—Wanyɛ Yaredfoɔ kasa no basabasa wɔ Babel abantentene no ho—Awurade hyɛ wɔn bɔ sɛ ɔbɛdi wɔn anim de wɔn akɔ asaase a wɔasa mu ayi no so, na wɔayɛ wɔn ɔman kɛseɛ.
Yaredfoɔ no boaboa wɔn ho wɔ wɔn akwantuo a wɔde bɛkɔ bɔhyɛ asaase no so—Ɛyɛ asaase a wɔasa mu ayi a ɛwɔ sɛ nnipa a wɔwɔ so no som Kristo anyɛ saa a wɔbɛtwa wɔn afiri so—Awurade kasa kyerɛ Yared nuabarima no dɔnhwere mmiɛnsa—Yaredfoɔ no pam ahyɛn—Awurade bisa Yared nuabarima no sɛ ɔnkyerɛ ɛkwan a ɔbɛfa so ama kanea aba ahyɛn no mu.
Yared nuabarima no hunu Awurade nsateaa sɛ ɛreka aboɔ dunsia no—Kristo de ne honhom honamdua no kyerɛ Yared nuabarima no—Wɔn a wɔwɔ nimdeɛ a ɛwie pɛyɛ no biribiara ntumi nsi wɔn kwan sɛ wɔbɛwura nkatanim no mu—Wama asekyerɛfoɔ sɛ wɔn nna Yared twerɛtohɔsɛm no adi.
Ɔhyɛ Moronae sɛ ɔnsi Yared nuabarima no adeɛ a ɔtwerɛe no ano—Ɛnsɛ sɛ ɔda no adi kɔsi sɛ nnipa bɛnya gyedie mpo te sɛ Yared nuabarima no—Kristo hyɛ nnipa sɛ wɔnnye ɔno ne n’akyidifoɔ no nsɛm no ni—Ɔhyɛ nnipa sɛ wɔnsakyera, na wɔnnye asɛmpa no ni, na ɔnnye wɔn.
Adansefoɔ mmiɛnsa ne adwuma no ankasa bɛgyina hɔ ayɛ adanseɛ wɔ Mormon Nwoma no nokware a ɛyɛ.
Mframa de Yaredfoɔ ahyɛn no kɔduru bɔhyɛ asaase no so—Nkurɔfoɔ no yi Awurade ayɛ wɔ ne papayɛ ho—Wɔsi Oriha ɔhene wɔ wɔn so—Yared ne ne nuabarima no wu.
Oriha dii hene wɔ teneneeɛ mu—Wɔnam basabasayɛ ne akasakasa so te Sule aheman ne Koho aheman a wɔyɛ akorafoɔ no—Nkɔmhyɛfoɔ kasa tia nkurɔfoɔ no atirimuɔdensɛm ne wɔn abosomsom, ɛno akyire yi wɔsakyeraae.
Ntɔkwa ne akasakasa si aheman no ho—Akis te kokoa mu nsedie kuo sɛ ɔde rekɔkum ɔhene no—Kokoa mu kuo firi ɔbonsam hɔ na ɛde amansɛeɛ ba—Wɔbɔ abɛɛforo Amanamanmufoɔ no kɔkɔ wɔ kokoa mu kuo a wɔbɛpɛ sɛ wɔbɛtu fawohodie a ɛwɔ nsaase, aheman, ne aman nyina ara guo no ho.
Aheman no nam adedie so, nhyehyɛeɛ bɔne so, ne awudie so firi nnipa baako so kɔ baako nso hɔ—Ema hunu Teneneeni no Ba no—Nkɔmhyɛfoɔ bebree bɔ nsakyeraɛ ho dawuro—Ɛkɔm ne awɔwɔ a wɔn ano yɛ borɔ ha nkurɔfoɔ no.
Ɔhene koro di koro adeɛ—Ahemfo no mu bi yɛ atenenee; ebinom nso yɛ atirimuɔden—Mmerɛ a treneneeyɛ tintimm no, Awurade hyira nkurɔfoɔ no na wɔyɛ frɔmfrɔm.
Akokoakoko, akyinnyeɛ, ne atirimuɔden di akotene wɔ Yaredfoɔ abrabɔ mu—Nkɔmhyɛfoɔ hyɛ nkɔm sɛ, sɛ Yaredfoɔ no ansakyera a wɔbɛsɛe wɔn korakora—Nkurɔfoɔ no po nkɔmhyɛfoɔ no nsɛm.
Ɔkɔmhyɛni Eter tu nkurɔfoɔ no fo sɛ wɔnnye Onyankopɔn nni—Moronae ka anwanwadeɛ ne deɛ ɛyɛ ahodwiri a gyedie yɛ—Gyedie maa Yared nuabarima no hunuu Kristo—Awurade ma nnipa mmerɛyɔ ama wɔaberɛ wɔn ho ase—Yared nuabarima no nam gyedie so tutu Bepɔ Serin—Gyedie; anidasoɔ, ne ɔdɔ mapa ho hia ma nkwagyeɛ—Moronae hunu Yesu animuu ne animuu.
Eter ka Yerusalem Foforɔ a Yosef aseni no bɛkyekyere no wɔ Amerika no ho asɛm–Ɔhyɛ nkɔm, na wɔto no twene, ɔtwerɛ Yaredfoɔ abakɔsɛm, na ɔka Yaredfoɔ a dabi wɔbɛseɛ no ho asɛm—Akokoakoko sɔre wɔ asaase no so nyina ara.
Nkurɔfoɔ no amumuyɛ de nomee ba asaase no so—Koriantuma ne Gilead, na afei Lib, na afei Sis nya ntɔkwa—Mogya ne nnipakum hyɛ asaase no so ma.
Wɔkum Yaredfoɔ mpempem wɔ ɛko mu—Sis ne Koriantuma boa nkurɔfoɔ no nyina ara ano sɛ wɔrekɔko honam mu awu—Awurade Honhom no ne wɔn antena bio—Wɔsɛe Yared man no korakora—Koriantuma nko ara na ɔka.
Moronae twerɛ deɛ ɛbɛyɛ mfasoɔ ama Lamanfoɔ no—Wɔkum Nifaefoɔ a wɔampene sɛ wɔbɛpo Kristo no. Bɛyɛ mfinhyia 401–421 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Yesu ma Nifaefoɔ akyidifoɔ dumienu no tumi sɛ wɔmfa Honhom Kronkron akyɛdeɛ no mma. Bɛyɛ mfinhyia 401–421 wɔ Kristo wuo akyiri.
Asɔre mpanimfoɔ de wɔn nsa gu tiri so hyɛ asɔfoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ. Bɛyɛ mfinhyia 401–421 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Ɔkyerɛkyerɛ sɛdeɛ asɔre mpanimfoɔ ne asɔfoɔ de Awurade adidie paanoo no ma mu. Bɛyɛ mfinhyia 401–421 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Wɔkyerɛkyerɛ ɛkwan a wɔfa so de Awurade adidie bobesa no ma mu. Bɛyɛ mfinhyia 401–421 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Wɔbɔ nkurɔfoɔ a wɔsakyera asu na wɔne wɔn nya yɔnkofa—Wɔde asɔremma a wɔsakyera bɔne kyɛ wɔn—Wɔnam Honhom Kronkron tumi so na ɛyɛ nhyiamudie. Bɛyɛ mfinhyia 401–421 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Wɔto nsa frɛ sɛ wɔmɛwura Awurade ahomegyeɛ mu—Momfa akoma pa mmɔ mpaeɛ—Kristo Honhom boa nnipa ma ɔhunu deɛ ɛyɛ papa ne bɔne—Satan daadaa nnipa ma ɔpo Kristo ma ɔyɛ bɔne—Nkɔmhyɛfoɔ no da Kristo maɛ no adi—Wɔnam gyedie so yɛ nkɔnyaa na abɔfoɔ bɛsom—Ɛsɛ sɛ nnipa nya nkwa a ɛnniawieɛ ho anidasoɔ na wɔsɔ ɔdɔ mapa mu yie. Bɛyɛ mfinhyia 401–421 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Nkwadaa nketewa asubɔ yɛ akyiwasɛm bɔne—Nkwadaa nketewa wɔ nkwa wɔ Kristo mu, ɛnam Mpata no nti—Gyedie, nsakyeraɛ, ɔdwoɔ ne akoma a ɛyɛ mmerɛ, Honhom Kronkron no gyeɛ, ne sɛ wo bɛsi apenee akɔsi awieɛ no na ɛkɔ nkwagyeɛ mu. Bɛyɛ mfinhyia 401–421 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Nifaefoɔ ne Lamanfoɔ nyina ara gu wɔn ho anim ase na wɔhwere wɔn animuonyam—Wɔyɛ wɔn ho ayakayakadeɛ na wɔkumkum wɔn ho—Mormon bɔ mpaeɛ sɛ adom ne papayɛ mmra Moronae so afebɔɔ. Bɛyɛ mfinhyia 401–421 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Mormon Nwoma no ho adanseɛ nam Honhom Kronkron no tumi so ba—Wɔde Honhom akyɛdeɛ no ma agyedifoɔ—Honhom mu akyɛdeɛ ne gyedie na ɛnam dabiara—Moronae nsɛm no kasa firi mfuturo mu—Momra Kristo hɔ, na monwie pɛ yɛ wɔ ne mu, na monte mo akra ho. Bɛyɛ mfinhyia 421 wɔ Kristo awoɔ akyiri.
Mormon Nwoma no di Yesu Kristo kronkronyɛ ho adanseɛ kyɛn nwoma biara, ɛna Yesu Kristo no ho asɛmpa nkyerɛkyerɛ wɔ mu. Nsɛmtire ne nhwehwɛmu a edidi so yi ma yɛhunu Mormon Nwoma no mu nnipa, meamea, nkyerɛkyerɛ ɛne nsɛm a esisiiɛ nyina ara.